December 2011 ~ ဆုံနေကြ
Friday, December 30, 2011 လပြည့်ဝန်း No comments
“ဗိုလ်ချုပ်ဟာ ကျနော်တို့နိုင်ငံရဲ့ လွတ်လပ်ရေးကို ရအောင်ယူပေးခဲ့တဲ့ ကျေးဇူးရှင်ပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဇာတ်ကား ရိုက်ကူးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျနော်တို့ဘက်က ၀ိုင်းဝန်းကူညီပေးဖို့ အဆင်သင့် ရှိပါတယ်” လို့ ၂၀၁၁ ခု ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက်နေ့က မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်း ရုံးချုပ်မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်နဲ့ ဗွီဒီယိုလောက တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် မှာကြားတဲ့ အခမ်းအနားမှာ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ငိုကျော်ဆန်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒါကလည်း သူ့စိတ်ထဲ ရင်ထဲက ပြောခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ မင်းသားကြီး ညွန့်ဝင်းက မေးလို့ မလွှဲသာ မရှောင်သာ ပြောလိုက်တဲ့ စကားပါ။ တကယ်တော့ ငိုကျော်ဆန်းဟာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ သူ့သမီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တို့ကို လူထုချစ်ခင်မှု များပြားနေတာကို မနာလိုဖြစ်ခဲ့သူပါ။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို စော်ကားခဲ့သလို သူ့သမီးကိုလည်း ရှုတ်ချခဲ့သူပါ။ အဲဒါကလည်း သူ့ပထွေးကြီး သန်းရွှေအလိုကျ နေပြသူ ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို နေပြည်တော်ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပထမအကြိမ် ရောက်လာတုန်းက တခြားဝန်ကြီးတွေနဲ့ မတူဘဲ ခန်းမထဲက ရှောင်ပြေးသူဆိုတဲ့ သက်သေက ထင်ရှားပါတယ်။
အဲဒီ ငိုကျော်ဆန်းက န၀တ၊ နအဖခေတ်လုံး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပုတ်ခတ်ပြောဆိုတဲ့ လူတွေထဲမှာ ထိပ်ဆုံးက ပါဝင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ သူပြောခဲ့တဲ့ စကားတခွန်းကတော့ “ဒီမိန်းမ တိုင်းပြည်အတွက် မြက်တပင် နှုတ်ဖူးလို့လား” တဲ့၊ အဲဒီစကားကို မုံရွာခရိုင်က ကျေးရွာတွေကို ရောက်တိုင်း ပြောခဲ့တာပါ၊ သူတို့ကကော တိုင်းပြည်အတွက် ဘာလုပ်ပေးနေလို့လဲ၊ တိုင်းပြည်က အဆီအနှစ်တွေကို ရောင်းစား၊ ခွစားနေတာကြောင့် ခုဆို သံယံဇာတတွေ ကုန်လုနီးနီးဖြစ်နေပြီး မုံရွာခရိုင်က လူတွေနဲ့ သူ့ဇာတိ ပုလဲမြို့နယ်ကလူတွေ သူ့အကြောင်းကို ပိုပြီးသိပါတယ်။ လူပုသလောက် ဉာဏ်များသူလို့လည်း ကျော်ကြားခဲ့ပါတယ်။
သူကိုင်တွယ်ရတဲ့ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှာဆို သူထင်ရာစိုင်းခဲ့သူဖြစ်လို့ သူ့ကို မကျေနပ်ကြတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေ တော်တော်များပါတယ်။ အဓိက မကျေနပ်မှုကတော့ ဌာနမှာ အရေးပါတဲ့ ရာထူးခန့်ထားရာမှာ နှစ်နဲ့ချီပြီး မျှော်လင့်ချက်နဲ့ ကြိုးစားနေတဲ့ အရပ်သားဝန်ထမ်းတွေကို တယောက်မှ နေရာမပေးခဲ့တာပါပဲ။ အရေးပါတဲ့ ရာထူး၊ စားပေါက်ချောင်မယ့် ရာထူးတွေကို သူ့တပည့် တပ်ထွက်တွေပဲ နေရာပေးတာပါ။ သတင်းစာတိုက်တွေမှာတောင် ပညာရှင်မဟုတ်တဲ့ ဗိုလ်ကြီးဟောင်း၊ ဗိုလ်မှူးဟောင်း သူ့တပည့်တွေကိုပဲ နေရာပေး၊ ရာထူးတိုးပေးခဲ့တာမို့ ၀န်ထမ်းများရဲ့ လေးစားယုံကြည်မှုနဲ့ ကင်းကွာခဲ့သူပါ။
အလားတူပါပဲ ပညာရှင်များသာ လုပ်လို့ရတဲ့ မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြား၊ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်း၊ ဗဟိုပုံနှိပ်တိုက်လို နေရာမျိုးတွေမှာလည်း ပညာရှင်တွေထက် တပ်ထွက်ဗိုလ်ကြီးဟောင်း ဗိုလ်မှူးဟောင်းတွေပဲ နေရာပေးခဲ့တာ ခုချိန်ထိပါပဲ။ သတင်းနဲ့ စာနယ်ဇင်း ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ဗဟိုပုံနှိပ်တိုက် ဦးဆောင်ညွန်ကြားရေးမှူး၊ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်း ဦးဆောင်ညွန်ကြားရေးမှူး၊ မြန်မာ့အသံနှင့် ရုပ်မြင်သံကြား ညွန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေး ညွန်ကြားရေးမှူးချုပ်တွေဟာ သူ့တပည့် တပ်ထွက် ဒု-ဗိုလ်မှူးကြီးဟောင်း ဗိုလ်မှူးကြီးဟောင်းများပဲဆိုတာ ဒီနေ့အထိ စစ်ဆေးကြည့်လို့ရပါတယ်။ ၀န်ကြီးရုံးက ရုံးအဖွဲ့မှူးဆိုတာ ဒု-ညွန်ကြားအဆင့်ရှိသူဖြစ်လို့ ၀န်ကြီးရဲ့ကိုယ်ရေးအရာရှိ ဗိုလ်ကြီးမြင့်ထွေးကိုပဲ နေရာပေးခဲ့ပါတယ်။
ငိုကျော်ဆန်း ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး မဖြစ်ခင်က ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ ပြန်ကြားရေးဘ၀ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေက ခုဆို တော်တော်ကွာသွားပါပြီ။ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းက ဆင်ဆာဖြတ်တောက်မှုကို တာဝန်ယူရတဲ့ ဗိုလ်မှူးဟောင်း သိန်းထွန်းအောင်နဲ့အဖွဲ့ရဲ့ မသမာမှု၊ လာဘ်စားမှု၊ ဘက်လိုက်မှု၊ စာနာညှာတာခြင်းကင်းမှုတွေကို တိုင်ကြားရင်လည်း ငိုကျော်ဆန်းက အရေးမယူပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲဒီလူတွေက သူ့ကို လုပ်ကျွေး ရှာကျွေးနေလို့ပါပဲ။
ငိုကျော်ဆန်းကို ရှာကျွေးနေတဲ့ ဗိုလ်မှူးဟောင်း သိန်းထွန်းအောင်
ဒီထက်ရှင်းတာ တခုကို သက်သေပြပါ့မယ်။ ၁၀-၁၂-၂၀၁၁ နေ့က ကျင်းပတဲ့ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်နဲ့ ဗွီဒီယိုလောက ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ရုပ်ရှင်လောကသားတွေနဲ့ တွေ့ဆုံပွဲမှာ အမှန်တကယ် အကြံပြုစာတမ်း တင်ခဲ့ကြတဲ့ ဒါရိုက်တာမောင်မျိုးမင်းနဲ့ သရုပ်ဆောင်ဇင်ဝိုင်းတို့ကို ဖိတ်ကြားခြင်းမပြု၊ တက်ရောက်ခွင့်မရှိ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်က ဆင်ဆာကိစ္စ ပြင်းပြင်းထန် ဝေဖန်အကြံပြုစာတမ်း တင်ခဲ့ကြလို့ပါပဲ။ အဲဒါ ငိုကျော်ဆန်းရဲ့ ကြီးမားပြင်းထန်တဲ့ အငြိုးအတေးတခုဆိုတာ ပေါ်လွင်ပါတယ်။
ငိုကျော်ဆန်းရဲ့အကျင့်တခုကတော့ စာပေ၊ ရုပ်ရှင်၊ ဂီတ၊ သဘင်လောကသားတွေကို သူ့လက်အောက်က လူတွေလို အပေါ်စီး ဆက်ဆံခြင်းပါပဲ။ သူ စီမံတာပဲ နာခံရမယ်၊ သူပြောတာပဲ နားထောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ တဖက်သတ် အနိုင်ကျင့်တဲ့ စိတ်ဓာတ်ပါပဲ။ ဥပမာတခုပေးပြီး ပြောရရင်တော့ စာနယ်ဇင်းဥပဒေ သတ်မှတ်ရေးကိစ္စမှာ စာနယ်ဇင်းလောကသားတွေနဲ့ လုံးဝညှိနှိုင်းခြင်းမရှိပါဘူး၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပြန်ကြားရေးကော်မတီ ဥက္ကဌ သူရဦးအေးမြင့်ကပဲ စာနယ်ဇင်းလောကသားတွေကို လေးလေးစား တွေ့ဆုံ ညှိနှိုင်းပွဲတခုကို ရန်ကုန်ကိုလာပြီး လုပ်ခဲ့တာပါ။ အားလုံးတက်ရောက်စေချင်တဲ့ စေတနာနဲ့ နေပြည်တော်ကို မခေါ်ဘဲ ရန်ကုန်မှာ လုပ်ခဲ့တဲ့ စေတနာက သိသာပါတယ်။ ငိုကျော်ဆန်းကတော့ ခုချိန်ထိ စာနယ်ဇင်းတွေကို အပေါ်စီးက ဆက်ဆံတုန်း၊ ထိန်းချုပ်ကန့်သတ်ဖို့ ကြိုးစားနေတုန်းဆိုတာ အားလုံးသိကြပါတယ်။
သရုပ်ဆောင် ဇင်ဝိုင်းက “ကျနော်တို့ ရုပ်ရှင်သမားတွေရဲ့ ကုပ်ပေါ်မှာ ဓားတွေ မိုးထားတယ်။ ထုတ်လုပ်မှု ဆိုတဲ့ ဓား၊ ဆင်ဆာမူဝါဒ ဆိုတဲ့ ဓား၊ ဖြန့်ချိရေးနဲ့ ရုံတင်ပြသရေး ဆိုတဲ့ ဓားတွေအပြင် ရုပ်ရှင်သမားတွေရဲ့ ရင်တွေ ကျောတွေကို ထောက်ထားတဲ့ ဓားတွေ လှံတွေလည်း ရှိနေပါသေးတယ်။ ပိုဆိုးတာက အဲဒီဓားတွေကို ဆွဲနုတ်ဖို့ ကြိုးစားတာနဲ့ ပိုမိုကြီးမားပြင်းထန်တဲ့ ရဲဒင်းလိုဟာမျိုးနဲ့ ငယ်ထိပ်တည့်တည့်ကို ခုတ်ပြီး မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းက အနိုင်ကျင့်တာမျိုးတွေ ခံခဲ့ရတာပါ။ ကိုယ့်လုပ်ငန်း အဆင်ပြေဖို့အတွက် ရိုးရိုးသားသား တင်ပြတာကို နိုင်ငံရေးအသွေးအရောင် ရှိတယ်ဆိုတဲ့ မှတ်ချက်နဲ့ ရုပ်ရှင်ကား အပိတ်ခံရတာမျိုး၊ ဆင်ဆာမှာ ပိုက်စိပ်တိုက် အဖြတ်ခံရတာမျိုး၊ အညစ်ခံရတာမျိုးတွေ ရှိပါတယ်။ ဆွေးနွေးပွဲကို ဖိတ်ကြားခြင်းမခံရတဲ့ သူတွေကတော့ အသေးစိတ် ရေးသားတင်ပြခဲ့တဲ့ ကျနော်တို့ ၄ ဦးပေါ့၊ ကျနော်ရယ်၊ ကိုမျိုးမင်းရယ်၊ ၀ိုင်းရယ်၊ ကျော်ဇောလင်း အပါအ၀င် တော်တော်များများကို တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ တက်ခွင့်မရဘူး၊ ဖိတ်ကြားခြင်းမခံရဘူး၊ မပြောရဲတဲ့ လူတွေကိုပဲ ဖိတ်တယ်” လို့ ရင်ဖွင့်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒါရိုက်တာမောင်မျိုးမင်းကလည်း “ဆင်ဆာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မသမာမှုတွေ၊ အားနည်းချက်တွေကို ၀န်ကြီးရုံးကို တိုင်ကြားနိုင်တယ်ဆိုလို့ တိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အရေးယူခြင်း မရှိခဲ့ပါဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်လောက်က ရိုက်ကူးပြသခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကား ပြန်ရိုက်ခွင့်တောင်းခဲ့တာ အကြောင်းမျိုးစုံပြပြီး ခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် တခြားတယောက်က ရိုက်ကူးခွင့်တင်တဲ့ အခါမှာတော့ အလွယ်တကူ ရိုက်ခွင့်ရပါတယ်။ အဲဒါ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး မုန်းတီးမှုနဲ့ နှိပ်ကွပ်တာပါ။ ဒါမျိုးကို ၀န်ကြီးဆီ တိုင်တော့လည်း ဘာမှ ဖြစ်မလာပါဘူး။ မျက်ခြယ်ဗွီဒီယိုက ထုတ်လုပ်တဲ့ ‘ယောက်ျားစကား’ ဇာတ်ကားမှာ အင်္ဂလိပ် ကိုလိုနီနယ်ချဲ့ ပုလိပ်တွေကို မြန်မာမျိုးချစ် သူရဲကောင်းက လှောင်ပြောင်ပြောဆိုခဲ့တဲ့ အခန်းကို ဆင်ဆာဖြတ်ခိုင်းပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို တနည်းအားဖြင့် ထိခိုက်လို့တဲ့။ ဘာမှမဆိုင်ဘူးနော်။ ဒါဆို မြန်မာမျိုးချစ်သူရဲကောင်းတွေက ကိုလိုနီပုလိပ်တွေကို ရိုရိုသေသေ ဆက်ဆံတဲ့ကားမျိုး ရိုက်ရမှာလား။ မဖြစ်နိုင်ပါ။ ဇာတ်လမ်း ယုတ္တိမရှိပါ။ ဒါမျိုးကို ကျနော်က တိုင်တယ်။ ဖြေရှင်းခွင့်မရဘဲ လည်စင်းခံခဲ့ရသူတွေလည်း အများကြီးရှိတယ်။ တကယ်ခံစားရပါတယ်” လို့ ရင်ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။
ငိုကျော်ဆန်းက ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းက သူ့တပည့်တွေ သောင်းကျန်းနေတာ မျက်ကွယ်ပြုထားတယ်။ အထူးသဖြင့် ဆင်ဆာကိုင်တဲ့ ဗိုလ်မှူးဟောင်း သိန်းထွန်းအောင် လုပ်သမျှ ထောက်ခံနေတယ်။ အဲ့ဒီအခန်းကိုဖြတ် ဇာတ်လမ်းထဲက ဗိုလ်မှူးဆိုတာသူပဲ၊ သူက ငိုကျော်ဆန်းကို ရှာကျွေးနေတာလေ။ လက်သပ်မွေးရမှာပေါ့၊ အဲဒီဗိုလ်မှူးက ရွှေကို ယူသည်၊ ငွေကို ယူသည်၊ ပြီးတော့ လူကိုပါ ယူသည်ဆိုတဲ့ လူစားမျိုး။ ကဲ ... ကဲ ပြောရမယ်ဆိုရင် အများကြီး ကျန်သေးတယ်။ အထက်မှာ ထုတ်ဖော်ရေးသားသွားတဲ့ အခန်းတွေ အများကြီး။ ဒီအခန်းတွေကိုရော တကယ်ဖြတ်ကြမှာလား။ နားထဲမှာတော့ (ဒီအခန်းကို ဖြတ် - ဒီအခန်းကို ဖြတ်) ဆိုတဲ့ အသံ ပဲ့တင်ထပ်နေတယ်ဗျာ။
၀ါယာရှော့မှတစ်ဆင့် ဂိုဒေါင်အတွင်းရှိ ယမ်းစိမ်း၊ ကန့် စသောပစ္စည်းများအား ကူးစက်ကာ မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း မီးသတ်ဦးစီးဌာနမှ ပြောကြား
Thursday, December 29, 2011 လပြည့်ဝန်း No comments
အဆိုပါပေါက်ကွဲလောင်ကျွမ်းမှုကြီးကြောင့် ဘေးပတ်ဝန်းကျင်အားလုံးရှိ နေထိုင်သူများ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး သေဆုံးသူများလည်းရှိသည်။ ဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်နှင့် မည်မျှထိခိုက်ဆုံးရှုံးသည်ကို အတိအကျ သိရှိရခြင်း မရှိသေးပါ။ ဒဏ်ရာရရှိသူများကို နီးစပ်ရာကားများဖြင့် ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးသို့ ပို့ဆောင်ထားရကြောင်းလည်း သိရသည်။(ယခုအထိ မီးလောင်ကျွမ်းနေဆဲဖြစ်သည်။ ၂၉- ၁၂ - ၂၀၁၁ နံနက် ၃ နာရီ ၄၀ မိနစ်အထိ )
''ကျွန်တော်တို့ အိပ်နေတုန်း ၀ုန်းကနဲဆို အိမ်က ပြိုဆင်းသွားတယ်။ အိမ်ထဲကနေ ကမန်းကတန်းထွက်ပြီး နီးစပ်ရာမှာ မြစ်ကမ်းဘေးမှာ ၀ပ်နေရတယ်။ ကျန်တဲ့သူတစ်ချို့ကတော့ အုတ်နံရံစတွေ လွင့်ပျံ့ထွက်လာတာနဲ့ ထိခိုက်မိပြီး သေသူသေ၊ ဒဏ်ရာရသူရ၊ လဲသူလဲနဲ့ နေရာအနှံ့ ရှိခဲ့တယ်။ အဲဒီဂိုထောင်ရဲ့ ပတ်ပတ်လည်မှာနေတဲ့သူအားလုံးနီးပါး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတယ်။ ဂိုထောင်ဘေးက လမ်းခြားနေတဲ့ အိမ်တွေတောင် ဘာမှမသိ လိုက်ရဘဲ လွင့်ထွက်လာတဲ့ အပိုင်းအစတွေကြောင့် ပြိုကျကုန်တဲ့အထိ အရှိန်က ပြင်းလွန်းတယ်။ ချောင်းတစ်ဖက်ကမ်း ဒေါပုံဘက်အခြမ်းမှာနေတဲ့ သူတွေကိုတောင် လွင့်စင်လာတဲ့အပိုင်းအစတွေ ထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ သိရတယ်'' ဟု ဂို ထောင်ဘေးတွင် နေထိုင်ကာ ယခုဖြစ်စဉ်အား ကိုယ်တွေ့ကြုံတွေ့ခဲ့သူတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးရရှိသော သတင်းများအရ ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတွင် လတ်တလော စာရင်းကောက်ခံမှုအရ ၁၄ ဦးသေဆုံး(ကျား ၇၊ မ ၄၊ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင် ၃ ဦး)ပြီး ၅၅ ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိထားကြောင်း နံနက် ၄ နာရီ ရရှိသော သတင်းများအရ သိရှိရသည်။
ဒီဇင်ဘာ ၂၉ ရက်။
9:00 AM (Update)
နံနက် (၉)နာရီတွင် သိရှိရသော သတင်းအရ ဒဏ်ရာရရှိသူ (၇၈) ဦး ရှိပြီး၊ သေဆုံးသူ (၁၇)ဦးရှိကြောင်း သိရှိပါသည်။ ဒဏ်ရာရသူ (၇၈)ဦးတွင် (၃၃)မှာ မီသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ပြီး သေဆုံးသူ (၁၇)ဦးအနက် (၆)ဦးမှာ မီသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်။ အခင်ဖြစ်ပွားရာနေရာ၌ ပစ္စည်းသိုလှောင်ရုံ (၃၇)လုံး ရှိသည့်အနက် (၁၆)လုံးမှ မီးလောင်ကျွမ်းမှုတွင် ပါဝင်သွားခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ မီးလောင်ကျွမ်းမှုတွင် မီးသတ်ယာဉ် (၂)စီးလည်း ပါဝင်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
9:15 AM (Update)
မီးလောင်ကျွမ်းမှုသည် ၀ါယာရှော့ပ်ဖြစ်ရာမှ စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု သုံးသပ်ပြောကြားမှုမျာရှိသော်လည်း ကြီးမားသောပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားရခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများမှ တရားဝင် သတင်းအတိအကျ ထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးပါ။
12:15 PM (Update)
"ကျွန်တော်တို့ အင်ဂျင်နီယာပိုင်းဆိုင်ရာ စစ်ဆေးတွေ့ရှိမှုတွေအရ ဒါဟာ ၀ါယာရှော့လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ လုံခြုံရေးမီးတစ်လုံးပဲ ရှိတဲ့နေရာကနေ ၀ါယာရှော့ဖြစ်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ မီးလောင်ရင်တော့ ၀ါယာတွေမီးလောင်မှာပါပဲ။ လူတွေက အပြစ်လျော့အောင်လို့သာ ၀ါယာရှော့လို့ပြောနေကြတာပါ။ တကယ်တော့ ဒီမီးလောင်ကျွမ်းမှုဟာ ၀ါယာရှော့ကြောင့်မဟုတ်တာ အထောက်အထားတွေရှိပါတယ်" ဟု အမှတ်(၂) လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးရေးအဖွဲ့ လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာမှုး ဦးတင်ထွန်း က ပြောပါသည်။
မီးလောင်ကျွမ်းမှုတွင် မီးငြိမ်းသတ်ရင်း သေဆုံးခဲ့ရသော မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင် (၅) ဦးအား ဒီဇင်ဘာ ၂၉ ရက် ညနေ ၅ နာရီ ၁၀ မိနစ်တွင် တပ်ဖွဲ့ဝင်အခမ်းအနားဖြင့် မီးသဂြိုလ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ မီးလောင်ကျွမ်းမှုနှင့် ပေါက်ကွဲမှုအတွင်း သေဆုံးသွားခဲ့သော တပ်ဖွဲ့ဝင် (၅) ဦးမှာ -
Wednesday, December 28, 2011 လပြည့်ဝန်း No comments
ရန်ကုန်မှာ စည်ပင်သာယာအဖွဲ့ က ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ မစခင်လောက်ကတည်းကကွန်ကရစ်လမ်းတွေကို ယခင်အချိန်တွေကထက် တိုးချဲ့ ခင်းပေးလာတာကိုတွေ့ ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုရက်ပိုင်းမှာတော့ ရန်ကုန်ရဲ့ မြို့ နယ်အနှံ့ မှာရှိတဲ့လိုင်စင်လက်ဝယ်မရှိတဲ့ လက်ဘက်ရည်ဆိုင်တွေကို ဒဏ်ကြေးငွေ (၁၀)ဆ ဆိုပြီးထပ်မံကောက်ခံလာပါတယ်။
လက်ဘက်ရည်ဆိုင်တွေဖွင့်ခွင့်လိုင်စင်မရှိတာက၂၀၀၅ခုနှစ်လောက်ကတည်းကစပြီးတရားဝင်လိုင်စင်လျှောက်ထားခွင့်ကို ချထားပေးခြင်းမရှိလို့ဝမ်းရေးအတွက်ရိုးရိုးသားသား ရှာဖွေစားသောက်လိုသူတွေအဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေရပါတယ်။
ဒါပေမယ့်စည်ပင်သာယာအဖွဲရဲ့တိုက်ရိုက်ကွပ်ကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့လိုင်စင်ရဆောက်လုပ်ရေးကန်ထရိုက်တွေကတော့ သူတို့ ဆောက်လုပ်တဲ့ အဆောက်အဦတွေရဲ့အထပ်အမြင့်နဲ့ အကျယ်အ၀န်းတွေကို တရားမ၀င်တဲ့နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့ သက်ဆိုင်ရာဌာနအရာရှိတွေကို လာဘ်ထိုးပြီး ဆောက်လုပ်နေကြပါတယ်။
ဓာတ်လှေကားတပ်ဆင်ဆောက်လုပ်ခွင့်စည်းကမ်းနဲ့ မညီတဲ့ နေရာတွေမှာလည်းလာဘ်ငွေအပေးအယူနဲ့ ဆောက်လုပ်နေကြပါတယ်။ မြို့ တော်ရဲ့ ဂရမ်မြေမဟုတ်တဲ့ပါမစ်မြေတွေမှာတော့တရားဝင်လိုင်စင်ကိုင်မထား တဲ့ဆောက်လုပ်ရေးကန်ထရိုက်တွေက ဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုမိန့်မယူဘဲ စည်ပင်အရာရှိတွေနဲ့ “ဒဏ်ကြေးဆောင်ပြီးဆောက်” ဆိုတဲ့ နားလည်မှုနဲ့ဒဏ်ကြေးနဲ့ အတူ လာဘ်ငွေပါ ယူပြီး (၃)ထပ်ခွဲ
တရားဝင်လိုင်စင်မရှိဘဲ ဆောက်လုပ်နေတဲ့ကန်ထရိုက်တွေဟာ ပြဿနာတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်လာရင်လည်း ရှောင်ပြေးဖိုလွယ်ကူနေတာကြောင့်မြေကွက်ပိုင်ရှင်တွေနဲ့အခန်းကြိုဝယ်သူတွေအပေါ်လိမ်ညာအခွင့်အရေးယူနိုင်ဖို့လမ်းဖွင့်ပေးထားသလိုဖြစ်နေပါတယ်။ အရင်တုန်းကလည်း ဆောက်လုပ်ရေးကန်ထရိုက်တွေ လိမ်ညာမှု၊
အရေအသွေးမပြည့်မီတဲ့ အဆောက်အဦတွေ ဆောက်လုပ်မှုတွေကြောင့် ဆောက်လုပ်ရေးလိုင်စင်ကို တရာဝင်လျှောက်ထားခိုင်းပြီး အာမခံငွေ တင်ပြီးမှ အလုပ်လုပ်ခွင့်ပြုတာဖြစ်ပါတယ်။
ခုတော့ တရားဝင်လိုင်စင်ရှိတဲ့ကန်ထရိုက်တွေကို ဂရမ်မြေရှိတဲ့နေရာတွေမှာဆောက်လုပ်ခွင့်ပေးပြီး လိုင်စင်မဲ့ ကန်ထရိုက်တွေကို အာမခံငွေ တင်စရာမလိုဘဲပါမစ်မြေရပ်ကွက်တွေမှာ လုပ်ကိုင်ခွင့်နဲ့ အတူ လိမ်ညာခွင့်ကိုပါ ပေးထားသလိုဖြစ်နေပါတယ်။ဒါ့ကြောင့်မည်သည့်နေရာမဆိုဆောက်လုပ်တဲ့ကန်ထရိုက်တွေကို
အာမခံငွေ ပေးစေပြီးမှ တရားဝင်ကန်ထရိုက်လိုင်စင်နဲ့ သာ ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်စေသင့်ပါတယ်။
၀မ်းရေးအတွက် ရိုးရိုးသားသား ရှာဖွေလုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ လက်ဘက်ရည်ဆိုင်တွေက ရရှိမယ့်အခွန်ငွေတွေ နေရာမှာ တရားမ၀င် ဆောက်လုပ်နေတဲ့ ကန်ထရိုက်တွေဆီက ဥပဒေအတိုင်း ကြပ်ကြပ်မတ်မတ် ကောက်ခံလိုတဲ့အခွန်ငွေတွေနဲ့ညီညွတ်မျှတအောင်အစားထိုးခုနှိမ်ခြင်းကသာအောက်ခြေအလွှာလူတန်းစားများ
အတွက် အသက်ရှူချောင်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ထင်မြင်ယူဆမိပါတယ်။
ဒေါင်းမာန်ဟုန် မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်
အကဲခတ်တွေ မတွေ့နိုင်အောင် အကျဉ်းသားတွေကို ဆီးရီးယားအစိုးရ ရွှေ့ပြောင်း
ဆီးရီးယားနိုင်ငံက အခြေအနေတွေကို အကဲခတ်ဖို့ရောက်နေတဲ့ အာရပ်အဖွဲ့ချုပ်က ကိုယ်စားလှယ်တွေ မတွေ့နိုင် အောင် အကျဉ်းသားတွေကို စစ်တပ်တွေထဲ ရွှေ့ပြောင်းထားတယ်လို့ လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့် အကဲခတ်နေ တဲ့ Human Rights Watch က ပြောလိုက်ပါတယ်။
တချိန်တည်းမှာပဲ အစိုးရကတော့ အကျဉ်းသားတွေ ရာချီပြီး ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ကြောင်း နိုင်ငံပိုင်သတင်းတွေက ကြေညာခဲ့တာပါ။ အာရပ်အဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ ထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေ အားလုံးကို ၀င်ခွင့်ရရေး တောင်းဆိုဖို့နဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို အစိုးရက ဟန့်တားတာတွေ ရှိတယ်ဆိုရင်လည်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောဆိုဖို့ နယူးယောက်အခြေစိုက် လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့က တိုက်တွန်းထားပါတယ်။
တာဝန်ပေးထားတဲ့ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကို ရုပ်သိမ်းဖို့၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ ပြန်လွှတ်ဖို့နဲ့ သွေးထွက်သံယို နှိမ်နင်းမှုတွေ ရပ်တန့်ဖို့ အစိုးရက ကတိပြုထားတာတွေ တည်မတည် စောင့်ကြည့်ဖို့ အာရပ်အဖွဲ့ချုပ်က ကိုယ်စားလှယ်တွေ ဆီရီးယားကို ရောက်မလာခင်မှာပဲ ရွှေ့ပြောင်းလိုက်တဲ့ အကျဉ်းသားပေါင်း ရာဂဏန်းအထိ ရှိနိုင်တယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။
အာရပ်အဖွဲ့ချုပ် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဆူဒန်နိုင်ငံက ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မိုဟာမက် ဒါဘီကတော့ Hama, Idlib နဲ့ Daraa တို့အပါအ၀င် တခြားမြို့တွေက နေရာသစ်တွေကို သွားရောက် ကြည့်ရှုမယ်လို့ ပြောခဲ့တာပါ။
အစိုးရကတော့ သမ္မတ Bashar al-Assad ကို ၉ လကြာ ဆန့်ကျင် ဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်း ဖမ်းဆီးထားသူ ၇၅၅ ယောက်ကို ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ကြောင်းနဲ့ ဒီလူတွေဟာ ဆီးရီးယားလူထုကို ဆန့်ကျင်တဲ့ အကြမ်းဖက် လုပ်ရပ် တွေကို ကျူးလွန်သူတွေ မဟုတ်ဘူးလို့ အစိုးရပိုင် သတင်းတွေက ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ကွယ်လွန်သူ မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် ကင်မ်ဂျုံအီးလ်ရဲ့ ပြုံယမ်းမြို့တော်က အသုဘ အခမ်းအနားမှာ ပူဆွေး ငိုကြွေးကြတဲ့ လူပေါင်းထောင်သောင်းချီ ဂါရ၀ ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ မှုန်မှုန်မှိုင်းမှိုင်း ကောင်းကင်ကနေ နှင်းတွေ တဖွဲဖွဲကျနေချိန်မှာပဲ ဒီကနေ့ အစောပိုင်း အသုဘ အခမ်းအနား စတင်လိုက်တာပါ။
နှင်းတွေဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ မြို့တော်ရဲ့ လမ်းပေါ်မှာပဲ ကွယ်လွန်သူ ခေါင်းဆောင်ရဲ့ ရုပ်ပုံကြီးကို တင်ဆောင်ထားတဲ့ အနက်ရောင်ကားတစင်းက အသုဘချတဲ့ အခမ်းအနားကို ဦးဆောင်ပြီး ဒီနောက်မှာတော့ အဖြူရောင် ပန်းတွေခင်းထားတဲ့ အပေါ်မှာ နိုင်ငံတော် အလံလွှမ်းထားတဲ့အခေါင်း တင်လာတဲ့ကားက လိုက်ပါ လာခဲ့တာပါ။ ငိုယိုနေသူတွေ လမ်းဘေး တချက်တချက်မှာ စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ကြပြီး၊ လူတွေလမ်းပေါ် လျှံကျမလာအောင်လည်း လုံခြုံရေးတွေက ထိန်းသိမ်းခဲ့ကြရတာပါ။
Kumsusan အမှတ်တရ နန်းတော်က ထွက်ခွာလာတဲ့ အသုဘ အခမ်းအနားအတွင်း သားဖြစ်သူ ကင်မ်ဂျုံအွန်း ဖခင်ရဲ့ အသုဘယာဉ်ဘေးကနေ လမ်းလျှောက် လိုက်ပါလာတာကိုလည်း နိုင်ငံပိုင် ရုပ်မြင်သံကြားတွေက ပြသခဲ့ကြတာပါ။ အနက်ရောင် ကုတ်အင်္ကျီ ၀တ်ဆင်ထားပြီး လမ်းပေါ်က နှင်းထဲ ခေါင်းငုံပြီး လက်တဖက်က အလေးပြု နေတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။
သူ့နောက်မှာတော့ သြဇာကြီးမားတဲ့ ဦးလေးဖြစ်သူ Jang Song Thaek ထိပ်တန်း ပါတီခေါင်းဆောင်တွေ ဖြစ်ကြတဲ့ Kim Ki Nam, Choe Thae Bok တို့အပြင် စစ်ဦးစီးချုပ် Ri Yong Ho၊ လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့များဆိုင်ရာ ၀န်ကြီး Kim Yong Chun စတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်း လိုက်ပါလာခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရွှေဂက်စ် အကျိုးအမြတ် ရခိုင်ပြည်အတွက်လည်း ဖြစ်စေလို
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းဒေသတွင် တူးဖေါ်နေသည့် ရွှေသဘာဝဓာတ်ငွေ့ စီမံကိန်းမှ ရရှိသည့် အကျိုးအမြတ်များကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရမှ ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရသို့ ခွဲဝေပေးရန် ၂ဝ၁၂ ဇန်နဝါရီလ တရက်နေ့ တွင် ပြည်သူ့ဆန္ဒကောက်ယူ တင်ပြသွားမည်ဟု ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီ RNDP ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာအေးမောင်က ပြောသည်။
လာမည့်နှစ် ဇန်နဝါရီလအတွင်း ကျင်းပရန်ရှိသည့် လွှတ်တော် အစည်းအဝေးများတွင် ၂ဝ၁၂၊ ၂ဝ၁၃ ပြည်နယ်နှင့် တိုင်း ဘတ်ဂျက်များကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ တင်ပြရန်ရှိရာ အဆိုပါ ဘတ်ဂျက်ခွဲဝေမှုအတွက် ကြိုတင်
ပြင်ဆင်ခြင်းဟုလည်း ဒေါက်တာအေးမောင်က ပြောသည်။
"ကျနော်တို့တောင်းတာက ပြည်နယ်အစိုးရရဲ့ ဘတ်ဂျက်ကိုဗျ၊ ဘာကြောင့်တောင်းလဲဆိုရင် လာမယ့် ၃၁ ဇန်နဝါရီ မှာ ပြည်နယ်တိုင်း အားလုံးရဲ့ ဘတ်ဂျက်တွေ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကို တင်တော့မယ်။ ရွှေဂက်စ်က ကျပ်သန်းပေါင်း ဘယ်လောက်ရသလဲ၊ ပြည်ထောင်စုက ဘယ်လောက် ယူသွားပြီးပြီလဲ၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်
ပြည်နယ်အစိုးရကို ဘယ်လောက်ထည့်ဝင်ပေးမလဲ။ ဒါတွေအတွက် ကြိုပြင်တာပါ" ဟု မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
RNDP မှ ဦးဆောင်ပြုလုပ်သည့် ပြည်သူ့ဆန္ဒကောက်ယူပွဲကို ကျောက်ဖြူမြို့ နာရီစင်ကွင်းတွင် ကျင်းပရန်ရှိပြီး
ကျောက်ဖြူဒေသခံ ၅ဝဝ ကျော်ခန့်ကို ဖိတ်ကြားထားရာ ပြည်နယ်ကော်မရှင်မှ ခွင့်ပြုချက်ကို ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ရထားပြီးဟုလည်း သိရသည်။
ရွှေသဘာဝ ဓာတ်ငွေ့စီမံကိန်း အပါအဝင် ရခိုင်ကမ်းလွန်ဒေသမှ ထွက်ရှိသည့် သဘာဝဓါတ်ငွေ့ လုပ်ငန်းများမှ ရရှိသည့် အကျိုးအမြတ်များနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် လျှပ်စစ်မီးရရှိရေးတို့အတွက် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးရန် ရှိမရှိကို စက်တင်ဘာ ၁၉ ရက်နေ့ အမျိုးသား လွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင်လည်း ရခိုင်ပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ် ၂ မှ လွှတ်တော် အမတ် ဦးကျော်ကျော်က မေးမြန်းခဲ့သေးသည်။
ဤမေးခွန်းကို အမှတ် ၂ လျှပ်စစ်ဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်စိုးမှ ပြန်လည်ဖြေကြားရာတွင် ရခိုင်ကမ်းလွန်ဒေသ ရေတိမ် ပိုင်းနှင့် ရေနက်ပိုင်းတို့တွင် ကိုရီးယား၊ စင်္ကာပူ၊ တရုတ် အိန္ဒိယ နိုင်ငံများနှင့် မြန်မာ့ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ လုပ်ငန်းတို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြောင်းသာ ဖြေကြားခဲ့သည်။
တိုင်းရင်းသားဒေသများမှ ထွက်ရှိသည့် သယံဇာတများအား ကိုလိုနီပုံစံမျိုးမကျင့်သုံးသင့်ဘဲ မိသားစုစိတ်ဖြင့်သာ ခွဲဝေသုံးစွဲသင့်ကြောင်းလည်း ဒေါက်တာအေးမောင်က "အဓိကကတော့ ကိုလိုနီစနစ်လိုမျိုး ရှိသမျှပစ္စည်းကို ဂုတ်သွေးစုပ်သွားတဲ့ ပုံစံမျိုးမဖြစ်စေချင်လို့။ အကုန်လုံးကို ရတာယူမယ် ဆိုတဲ့စိတ်မရှိဘူး။ မိသားစုစိတ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ အမြင်လေးက ကျနော်တို့ တိုင်းရင်းသားတွေမှာ ရှိသွားစေချင်တယ်။
ကျနော်တို့လိုချင်တဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေ အားလုံးပါဝင်တဲ့ ပြည်ထောင်စုကို လိုချင်တယ်ဆိုရင် တိုင်းရင်းသားဒေသ
တွေကို ဖွံ့ဖြိုးစေချင်တယ်ဆိုရင် ပေးရမယ့် quota လေးကို ပေးပါ။ ကျနော်တို့က တိုက်နေတာ မဟုတ်ဘူး
တော်လှန်နေတာ မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်ဒေသကလည်း ထွက်သေးတယ် ရှိသမျှပစ္စည်းလည်း ယူသွားတယ်ဆိုရင်
ပြည်ထောင်စု အစိုးရကို ဘယ်လိုလုပ်ပြီး လက်ခံလို့ရမလဲ" ဟု မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
၂ဝ၁၁၊ ၂ဝ၁၂ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရ၏ ဘဏ္ဍာရေးလိုအပ်ချက်မှာ ၂ဝ ဘီလီယံကျပ် ရှိနေ သည်။ ဗဟိုအစိုးရ၏ ဘဏ္ဍာရေးလိုငွေမှာ ၂၂ဝ၁.၄၅ဝ ဘီလီယံကျပ်ဖြစ်ပြီး၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် အစိုးရများ အားလုံး၏ ဘဏ္ဍာရေးလိုငွေမှာ ၁၇ဝ.၄၉၅ ဘီလီယံကျပ် ဖြစ်သည်ဟုလည်း သိရသည်။
သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ၂ဝဝ ဘီလီယံ ကုဗမီတာ ထွက်ရှိမည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အနောက်ဘက် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင် အတွင်းရှိ ရွှေဂတ်စ်လုပ်ကွက်များကို ၂ဝဝ၃ ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းမှ စတင်တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ၂၈ဝဝ ကီလိုမီတာ ရှည်လျားသည့် ပိုက်လိုင်းဖြင့် တရုတ်ပြည်သို့ သွယ်တန်း ယူဆောင်မည် ဖြစ်သည်။
ရခိုင်ကမ်းလွန် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ တူးဖော်ရေး စီမံကိန်း အေ (၁) နှင့် အေ (၃) လုပ်ကွက်များမှ သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့ များကို ပင်လယ် ရေအောက်ပိုက်လိုင်း မှတဆင့်ကျောက်ဖြူမြို့သို့ သယ်ယူမည့် လုပ်ငန်းမှာ ၄ဝ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ပြီးစီးနေပြီး မဒေးကျွန်း ရေနက်ဆိပ် ကမ်းမှာမူ ၈ဝ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ပြီးစီးနေပြီဟု ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် ရွှေဂတ်စ် လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့မှ ကိုဝင်းအောင်က မဇ္ဈိမနှင့် အင်တာဗျူးတခုတွင် ပြောဆိုဖူးသည်။
အဆိုပါ လုပ်ကွက်နှစ်ခုမှ ခန့်မှန်းကုဗပေ ၄.၅ ထြီလီလျံ မှ ၇.၇ ထြီလီလျံထိ ထွက်ရှိမည်ဖြစ်ပြီး လာမည့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှ နှစ်ပေါင်း ၃၀ ခန့်အတွင်း ရောင်းချရာမှ ဒေါ်လာ ၂၉ ဘီလီယံ ခန့် ရရှိမည်ဖြစ်သည်ဟုလည်း သိရသည်။
နိုင်ငံခြားမှ ငွေလွှဲနိုင်ရန် ဧရာဝတီဘဏ် လုပ်ဆောင်နေဟု ဦးဇော်ဇော်ပြော
ရန်ကုန်(မဇ္ဈိမ) ။ ။ နိုင်ငံခြားမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ငွေလွှဲပို့ဆောင်နိုင်ရန် အတွက် စတင်ဆောင်ရွက်နေပြီ
ဖြစ်ကြောင်း ဧရာဝတီဘဏ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်ဇော်က ပြောသည်။
အင်္ဂါနေ့ ညနေက ရန်ကုန်မြို့ အင်းလျားလိတ်ဟိုတယ်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ဧရာဝတီဘဏ် တနှစ်ပြည့် ညစာစားပွဲ တွင် ထည့်သွင်းပြောဆိုသွားခြင်းဖြစ်သည်။
“အခု မလေးရှားက အလုပ်သမားတွေ ဗမာပြည်ကို ငွေပြန်လွှဲဖို့အတွက် ဆောင်ရွက်နေပါပြီ။ သို့သော် authorised dealer ရတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သွားတာ မဟုတ်သေးပါဘူး။ Swift code တွေ ရတဲ့အခါ နိုင်ငံတကာက ဘဏ်တွေနဲ့ ဆက်စပ် ပြီးလုပ်ဆောင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
ဦးဇော်ဇော်နှင့် ဦးကိုကိုထွေး (တော်ဝင်ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ) (ဓါတ်ပုံ မဇ္ဈိမ)
မြန်မာအမျိုးသားပိုင် ဘဏ်များအနေဖြင့် နိုင်ငံတကာ ဘဏ်လောကသို့ ထိုးဖောက် ဝင်ရောက်နိုင်ရန်မှာ အလှမ်း
ဝေးနေဆဲဖြစ်ပြီး စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှုကလည်း ဘဏ်လုပ်ငန်းအတွက် အဟန့်အတားတခု ဖြစ်နေသေးကြောင်း ထည့်သွင်း ပြောဆိုသွားသည်။
“ကျနော်တို့နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဒီဘဏ်တွေရဲ့ ငွေကြေးစီးဆင်းမှုနဲ့ လည်ပတ်မှု ဆိုတာ လည်း အတားအဆီး အနှောက်အယှက်တခု ရှိတယ်ဆိုတာတော့ မလွဲမသွေ တင်ပြလိုပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
ဧရာဝတီဘဏ်ကို ၂၁.၈.၂ဝ၁ဝ ရက်နေ့တွင် နေပြည်တော်၌ စတင်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပြီး တနှစ်အတွင်း နိုင်ငံတွင်း ဘဏ်ခွဲ ၁၇ ခု ဖွင့်လှစ်နိုင်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ တနှစ်ပြည့်ပွဲသို့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှ ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ မြန်မာ့ထိပ်တန်း စီးပွါးရေး လုပ်ငန်းရှင်များ၊
နိုင်ငံခြားဧည့်သည်များ စုစုပေါင်း ၄၀၀ ခန့် တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
တက်ရောက်လာသူ ပရိသတ်များထဲမှ မြို့တော်ဝန် ဦးလှမြင့်အပြင် ဦးအောင်ကိုဝင်း (ကမ္ဘောဇဘဏ်)၊ ဦးချစ်ခိုင် (မြန်မာ့ရှေ့ဆောင်ဘဏ်)၊ ဦးတေဇ (AGD ဘဏ်)နှင့် ဦးနေအောင် (United Myanmar ဘဏ်)တို့အား အထူးပြု
ကျေးဇူးစကား ဆိုသွားပြီး စီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအနေဖြင့် growing together, win-win situation
ဧရာဝတီဘဏ်မှာ ညီနောင်ဘဏ် ၈ ခုနှင့် မြို့နယ် ပေါင်း ၁၂ဝ ကို ချိတ်ဆက်ပြီး ငွေလွှဲလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေ ကာ စီးပွါးရေးလုပ်ငန်း ၃၅ဝဝဝ ခန့်နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသည့် ဘဏ်တခုဖြစ်ကြောင်း ဦးလှမြင့်က ပြော သည်။
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ နိုင်ငံတကာတွင် ဒီမိုကရေစီရေးနှင့် လွတ်လပ်မှုအတွက် အကူအညီများ ပေးနေသည့် OSI ခေါ် Open Society Institute ကို စတင်ထူထောင်သူ ဂျော့ဆိုးရော့စ် George Soros သည် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် အင်းလေးကန်သို့ အလည်အပတ်ရောက်နေသည်ဟု ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီး ဦးဝင်းမြင့်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
“သူတည်းတဲ့ ခေါင်တိုင် ကျေးရွာမှာရှိတဲ့ ဟိုတယ်က တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကို သွားတွေ့ပြီး ကျနော် သိရတယ်” ဟု ဦးဝင်းမြင့်က ဆိုသည်။
ဂျော့ဆိုးရော့စ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ တွေ့ဆုံရန် ရှိမရှိကိုမူ “သူခေါ်မှပဲ ကျနော်တို့ သွားမယ်။ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရကတော့ ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံခြားသားနဲ့ တွေ့ဖို့မတွေ့ဖို့ အမိန့်ထုတ်ထားတာ မရှိပါဘူး” ဟု ပြောသည်။
Open Sociaty Foundations ကို စတင်ထူထောင်သူ ဂျော့ဆိုးရော့စ် George Soros (ဓါတ်ပုံ wikipedia.org)
ညောင်ရွှေမြို့နှင့် ၇ မိုင်ခန့်ကွာဝေးသည့် အင်းလေးကန်စပ်မှ ခေါင်တိုင်ကျေးရွာတွင် တည်းခိုနေ သည့် ဂျော့ဆိုးရော့စ်သည် အင်းလေးနှင့် ပုဂံဒေသရှိ ၎င်းလှူဒါန်းထားသည့် နေရာများသို့ အလည်အပတ် လာရောက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
ဒီဇင်ဘာ ၂၆ ရက်နေ့က ကိုယ်ပိုင်လေယာဉ်ဖြင့် ရောက်ရှိလာပြီး လာမည့် လဆန်းတွင် ပြန်မည့် ဂျော့ဆိုးရော့စ်အား အစိုးရတာဝန်ရှိသူများက တွေ့ဆုံရန် ပြင်ဆင်နေသည်ဟု စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ရှင်ကြီးတဦးကလည်း ပြောသည်။
“၂၆၊ ၂၇ က သူ ရန်ကုန်မှာရှိပြီး ဒီနေ့တော့ အင်းလေးသွားတယ်ပြောတယ်။ သူ့သားနှစ်ယောက်လည်းပါတယ်။ သူ့ရဲ့ မိသားစု ဒီမှာ vacation visit ပေါ့ဗျာ” ဟု စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တဦးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက် တနှစ်လျှင် ဒေါ်လာ နှစ်သန်း သုံးစွဲလေ့ရှိသည်ဟု Zimbio နှင့် Forbes အင်တာနက်စာမျက်နှာများတွင် ရေးသားထားကြသည်။
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ကုမ္ပဏီများ မှတ်ပုံတင် ဖွဲ့စည်း တည်ထောင်ရာတွင် လုပ်ငန်း အမျိုးအစား အလိုက်
ရွေးချယ်ရန် ထားရှိခဲ့သည့် ကန့်သတ်ချက်များကို ပယ်ဖျက်လိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း အမျိုးသား စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
ယခင်က ကုမ္ပဏီ မှတ်ပုံတင်ရန် လျှောက်ထားရာ၌ လုပ်ငန်း ကဏ္ဍအသီးသီးတွင် လုပ်ငန်းရည်ရွယ်ချက် ကန့်သက်ချက် ၁၀ ခု ကျော်စီ သတ်မှတ်ထားသော်လည်း ယခု ထိုသို့ကန့်သတ်ထားချက်များ ပယ်ဖျက်ပေးလိုက်
ခြင်းဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါဝန်ကြီးဌာန ထိပ်တန်း အရာရှိတဦးက ပြောသည်။
“ပြောင်းလဲလာတဲ့ ခေတ်အခြေအနေအရ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေက ပိုမိုပြီး လွတ်လွတ်လပ်လပ် လုပ်ဖို့ အခွင့်အလမ်း ရှိသင့်တယ်။ ဒီလိုလုပ်နိုင်မှလည်း ပုဂ္ဂလိက စီးပွားရေးကဏ္ဍ အခွင့်အလမ်းတွေ ပိုများလာပြီးတော့မှ တိုင်းပြည်ရဲ့ စီးပွားရေး တိုးတက်မှုကို အထောက်အကူဖြစ်စေဖို့ လုပ်ငန်းရှင်တွေပိုပြီး လွတ်လွတ်လပ်လပ် လုပ်ကိုင်လာနိုင်အောင် ကန့်သတ်ချက်တွေ ဖြေလျှော့ပေးလိုက်တာပါ” ဟု သူက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ထိုအကြောင်းအရာများကို ဝန်ကြီးဌာနက ဒီဇင်ဘာ ၁၄ ရက်နေ့ နေ့စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး သမ္မတ ဦးစီးရုံးအပါအဝင် သက်ဆိုင်အရာ အစိုးရဌာနရုံးအသီးသီးတို့ ဖြန့်ဝေပေးခဲ့သည်။
ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်း ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခွင့် ယခင်က သက်တမ်း ၂ နှစ် သတ်မှတ်ထားပြီး ယခုအခါ ၃ နှစ် တကြိမ်သာ သက်တမ်းတိုးရတော့မည် ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်၌ပါရှိသည်။
ယခင်က ကုမ္ပဏီ မှတ်ပုံတင်ရန် လျှောက်ထားသည့်အခါ ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းတွင် လုပ်ငန်းရည်ရွယ်ချက် ၁၈ ခု ရှိသည့် အနက် ၅ ခု ကိုသာ ရွေးချယ်လုပ်ပိုင်ခွင့် ပြုခဲ့သလို၊ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွင်လည်း လုပ်ငန်းရည်ရွယ်ချက် ၁၀ ချက်ထဲမှ နှစ်သက်ရာ ၄ ခုသာ ရွေးချယ်ခွင့်ရှိပြီး၊ စက်မှု/ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းတွင် လုပ်ငန်းရည်ရွယ်ချက် ၁၄ ခု မနက် မှ ၄ ခုကိုသာ ကန့်သတ်ချက်များဖြင့် ရွေးချယ်ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။
“ရောင်းဝယ်ရေး” ကုမ္ပဏီတခု အောက်တွင် လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း၊ ရေထွက်ပစ္စည်း၊ သစ်တောထွက်ပစ္စည်း၊ စက်ကရိယာပစ္စည်း နှင့် ဆေးဝါး ပစ္စည်းများအပါအဝင် ၁၈ မျိုးရှိပြီး ကန့်သတ်ထားချက်များကြောင့် ထိုအထဲမှ ၅ မျိုးကိုသာ လုပ်ဆောင်ခွင့်ရမှာ ဖြစ်သည်။
ထိုအမျိုးအမည်များ အပြင် ထပ်မံတိုးချဲ့၍ လုပ်ဆောင်လိုပါက ကုမ္ပဏီ အသစ်ထောင်ပြီး လုပ်ကိုင်ရသဖြင့် လုပ်ငန်း
ဖေါင်းပွမှုများ ဖြစ်သကဲ့သို့ ငွေကြေးအရလည်း ကုန်ကျမှု များပြားခဲ့ရကြောင်း ရန်ကုန်အခြေစိုက် ရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီတခုမှ မန်းနေဂျင်း ဒါရိုတ်တာ တဦးက ပြောသည်။
“အခြားလုပ်ငန်းတွေ ထပ်ပြီးတော့လုပ်ချင်ရင်တော့ နောက်ထပ်ကုမ္ပဏီ ထပ်ထောင်ရတော့ လုပ်ငန်းဖေါင်းပွမှုတွေ
ဖြစ်ပြီးတော့ မလိုအပ်တဲ့ ကုန်ကျမှုတွေ ဖြစ်တော့ပေါ့ဗျာ၊ ခုလို ကန့်သတ်ချက်တွေ ဖယ်လိုက်တော့ စရိတ်စက အကုန်အကျ သက်သာပြီး လွတ်လွတ်လပ်လပ် လုပ်ခွင့်ရတာပေါ့ဗျာ” ဟု သူက မဇ္ဈိမကိုပြောသည်။
ယခင်အစိုးရလက်ထက်က ကုမ္ပဏီများကို လုပ်ပိုင်ခွင့် အားလုံးဖွင့်ပေးခဲ့လျှင် ယင်းတို့၏ လုပ်ပိုင်ခွင့် စည်းကမ်းကို
ကျော်ကာ ချိုးဖောက် လုပ်ဆောင် မှုများ မရှိစေရန်ဟု အကြောင်းပြကာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ မနှစ်မျို့သော ယင်းကန့်သတ်ချက်များကို ချမှတ်လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း ဝန်ကြီးဌာန အရာရှိကပြောသည်။
“အရင်တုန်းက လုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်ကလည်း မမှန်မကန်လုပ်တဲ့ ကိစ္စမျိုးလေးတွေက ရှိတော့ ဒီလိုအများကြီး လွတ်လွတ်လပ်လပ် လုပ်ခွင့်ပေးလိုက်ရင် မမှန်မကန် လုပ်ဆောင်မှုတွေက များလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ ဒါကြောင့်မလို့ ကျနော်တို့က ရည်ရွယ်ချက်တွေ ကန့်သတ်ပြီးတော့လုပ်မှ သင့်လျော်မယ်ဆိုပြီးတော့မှ ကန့်သတ်ခဲ့တာပေါ့” ဟု သူက ပြောသည်။
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) ခေါင်းဆောင် ဦးဝင်းတင်က နာမည်ကျော် လူရွှင်တော် ဇာဂနာအား NLD ပါတီဝင်ရန် ဖိတ်ခေါ်လိုက်သည်။
NLD တွင် ပညာတတ်လူငယ်ကင်းမဲ့နေကြောင်း မကြာသေးခင်က ပေါ်ပေါက်လာသည့် ဇာဂနာ၏ အငြင်းပွားဖွယ် ပြောဆိုချက်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ဧရာဝတီက အင်္ဂါနေ့က ဆက်သွယ် မေးမြန်းစဉ် ဦးဝင်းတင်က ထိုသို့ တုန့်ပြန်လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဒီဇင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့က ဘန်ကောက်မြို့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် တွေ့ရသော လူရွှင်တော် ဇာဂနာ (ဓာတ်ပုံ - ဧရာဝတီ)
“ကိုဇာဂနာကို ဖိတ်ချင်တယ်။ လာပါ ကိုဇာဂနာ။ ကိုဇာဂနာတို့ ၀င်လုပ်ကြပါ။ NLD မှာ ၀င်လုပ်ပါ။ ဒီပွဲကြီးဟာ ကျနော်တို့ တမျိုးသားလုံးနဲ့ ဆိုင်တဲ့ပွဲ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဦးဝင်းတင်က ဆိုသည်။
“နည်းတယ်၊ များတယ်ဆိုတာက အထင်အမြင်ကို ပြောတာပေါ့ဗျာ၊ ကျနော်က နည်းတယ်တို့၊ များတယ်တို့၊ အတိုင်းအတာတွေကို မပြောချင်ဘူး။ နည်းတယ် ပြောနေသူတွေ များများ ၀င်ပြီးဆောင်ရွက်ဖို့ လိုတယ်” ဟု ဦးဝင်းတင်က ဆက်ပြောသည်။
ဒီဇင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့က ဘန်ကောက်မြို့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် လူရွှင်တော် ဇာဂနာက မြန်မာလူငယ်များ အတွက် အလုပ် လုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာ လူငယ်အများစုမှာ ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ဗဟုသုတ မရှိကြောင်း၊ NLD တွင်လည်း အသက် ၄၀ အောက် ပညာရှင်၊ ပညာတတ်များ မရှိကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။
ဇာဂနာ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ခေတ္တရောက်ရှိစဉ် ထိုသို့ မှတ်ချက်ချလိုက်ခြင်းကို အင်တာနက် လူမှု ကွန်ရက် စာမျက်နှာများ၊ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး စိတ်ဝင်စားသူများကြားတွင် ငြင်းခုန် ဆွေးနွေးနေကြသည်။
NLD ခေါင်းဆောင် ဦးဝင်းတင်ကမူ ပါတီတွင် ပညာတတ်၊ ပညာရှိများ သာမက အလွှာ အသီးသီး ပါဝင်နေသည်ဟု ဆိုသည်။
“ဘွဲ့ ၂ ထပ်ကွမ်း၊ ၃ ထပ်ကွမ်း၊ ပါရဂူဘွဲ့ ရတဲ့လူတွေလည်း လိုတယ်။ အရေးကြီးတာက ဘွဲ့ရခြင်း၊ မရခြင်း၊ အင်္ဂလိပ်လို တတ်ခြင်း၊ မတတ်ခြင်း၊ ဒါကို ပြောတာ မဟုတ်ဘူး။ လိုတာက ပညာတတ်တွေ လိုတာ။ ပညာတတ်တယ် ဆိုတာက လူထုအကျိုးကိုပြုနိုင်တဲ့၊ ပညာတွေ အမျိုးစုံ တတ်တဲ့သူတွေ လိုတာ။ ဒါပေမယ့်လို့ အဲဒီ ပညာတတ်တွေနဲ့ချည်း လုပ်လို့ မပြီးပါဘူး”ဟု သူက ဆိုသည်။
နိုင်ငံခြားတွင် ပညာ သွားရောက် သင်ယူပြီး ပြန်မလာသူများရှိကြောင်း၊ ပညာတတ်များ ပါတီ ၀င်ရုံသာမက အမှန်တကယ် အလုပ်လုပ်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ဦးဝင်းတင်က ပြောသည်။
NLD သည် သောကြာနေ့က ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်တွင် ပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခဲ့ပြီး ပါတီ ၀င်လိုသူများကို ဖိတ်ခေါ်လျက်ရှိသည်။ NLD တွင် နှစ်ပေါင်းများစွာ လုပ်ကိုင်ခဲ့သူများလည်း ပါတီဝင်ဖြစ်ရေးအတွက် ပြန်လည် လျှောက်လွှာတင်ရမည်ဟု NLD က ဆိုသည်။
အနာဂတ် NLD တွင် လူကြီးပိုင်းက နာယက နေရာများတွင်သာ တာဝန် ယူသွားမည်ဖြစ်သည်ဟု ဦးဝင်းတင်က ပြောသည်။
“လူငယ်ပိုင်းတွေကို တိုးတိုးပြီး နေရာပေးသွားဖို့ ကျနော်တို့ သဘောထားရှိတယ်။ လူငယ်ပိုင်းတွေ ၀င်ဦးဆောင်ကြတဲ့ အခါ လူကြီးပိုင်းတွေကလည်း ဖယ်ပေးသွားကြမှာဖြစ်တယ်” ဟု သူက ဆိုသည်။
ထိုသဘောထားသည် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကုန်ပိုင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်မှ လွတ်မြောက်စဉ် ပထမဆုံး ပြုလုပ်သည့် NLD ထိပ်တန်း ခေါင်းဆောင်များ အစည်းအဝေးတွင် ပေါ်ပေါက်လာခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
ဤအတောအတွင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရတို့၏ ဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်လာပြီး ပါတီအား ကော်မရှင်တွင် မှတ်ပုံတင်လိုက်သဖြင့် အလွှာအသီးသီးမှ လူထုက ကြောက်ရွံ့မှု မရှိကြတော့ဘဲ လာရောက် ထိတွေ့ ဆက်ဆံနေကြကြောင်း၊ NLD ပိုမို အားကောင်းစေရန် မည်သူ့ကို မဆို တံခါးဖွင့်ထားကြောင်း ဦးဝင်းတင်က ဆက်ရှင်းပြသည်။
၀န်းရံလာသူများထဲတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဓာတ်ပုံတွဲရိုက်လိုသူများ၊ ကိုယ်ကျိုးရှာသူများ၊ အမတ်ဖြစ်လိုသူများလည်း ပါလာနိုင်ကြောင်း သူက ဆိုသည်။
“ကျနော်တို့ပါတီကို အပြင်လူတွေ ၀င်လာနိုင်ဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အလွန် အင်မတန်အားကောင်းတဲ့၊ ဆွဲဆောင်အား ရှိတော့ လူတွေလည်း ပိုပြီး ၀န်းရံလာကြတဲ့ အခါကျတော့ ဒီလို ၀န်းရံလာတဲ့သူတွေကို တွန်းဖယ်တာတို့ ကျောခိုင်းတာတို့ ကျနော်တို့ မလုပ်ချင်ဘူး” ဟု သူက ဆိုသည်။
NLD ပါတီကို ၀န်းရံသူ များလာခြင်းသည် နိုင်ငံအတွက်လည်း အကျိုးရှိစေသည်ဟု သူက ပြောသည်။
ဂျီအက်စ်အမ်ဖုန်းများ ငါးနှစ်အတွင်း 4G အထိ အဆင့်မြှင့်မည်
ရန်ကုန်မြို့တွင်းတစ်နေရာတွင် မိုဘိုင်းဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ပြောဆိုနေသူများအား တွေ့ရစဉ်
ဂျီအက်စ်အမ် ဖုန်းများအား ငါးနှစ်အတွင်း 4G အဆင့်ထိ မြှင့်တင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ-ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံကြား ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲမှ သတင်းရရှိပါသည်။
လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖုန်းသုံးစွဲနိုင်မှုမှာ တစ်နိုင်ငံလုံးလူဦးရေ၏ ငါးရာခိုင်နှုန်းသာ ဖုန်းသုံးစွဲနိုင်သေးကြောင်း၊ ငါးနှစ်အတွင်း ဖုန်းအလုံးရေ သန်း ၃၀ ချထားကာ နိုင်ငံ့လူဦးရေ၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ဖုန်းသုံးစွဲနိုင်ရန် ချထားပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယခု ၂၀၁၁-၂၀၁၂ဘဏ္ဍာရေး နှစ်တွင် ဖုန်းအလုံးရေ လေးသန်းအား ချထားပေးရန် စီစဉ်ထားကြောင်း၊ လာမည့် ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာ ရေးနှစ်တွင် ဖုန်းအလုံးရေ နောက်ထပ် ငါးသန်းအား ထပ်မံချထားပေးရန် စီစဉ် ထားကြောင်း သိရသည်။ 4G အဆင့်ထိ မြှင့်တင်သွား မည်ဆိုသည်မှာ ကောင်းမွန်ကြောင်း၊ သို့သော် လတ်တလောတွင် နိုင်ငံ့လူဦးရေ၏ ငါးရာခိုင်နှုန်းသာ ဖုန်းသုံးနေသည့်အချိန်၌ပင် ဖုန်းလိုင်းများ ပြတ်တောက်မှု၊ ခေါ်ဆိုရ ခက်မှုများ ရှိနေသေးသည့်အတွက် အဆိုပါ အခက်အခဲများကိုလည်း ဦးစားပေး ဖြေရှင်းပေးခြင်းဖြင့် သုံးစွဲသူများကို ပိုမိုအဆင်ပြေစေမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖုန်းအသုံးပြုသူများက ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
''4G ကတော့ လုပ်ပေးနိုင်ရင် ကောင်းတာပေါ့။ အခုက နိုင်ငံ့လူဦးရေရဲ့ ငါးရာခိုင်နှုန်းပဲ ဖုန်းအသုံးပြုနိုင်သေးတာလေ။ အဲဒီအချိန်မှာတောင် ဖုန်းလိုင်းက အရမ်းကောင်းနေရမှာ။ အိမ်ထဲမှာ၊ အဆောက်အအုံထဲမှာမို့လို့ ဖုန်းမမိလို့ အပြင်ထွက်ပြောရတာမျိုး၊ ဖုန်းပြောနေရင်း တိခနဲ ပြတ်ကျသွားတာမျိုးလေးတွေ ရှိနေသေးတာ။ ဒါတွေကို အရင်ဦးစားပေး ဖြေရှင်းမယ်၊ ပြီးမှ 4G ကို သွားမယ်ဆို ပိုကောင်းမယ် ထင်တာပဲ။ သုံးစွဲရတဲ့သူတွေ လည်း ပိုအဆင်ပြေတာပေါ့။ တစ်ခုရှိသေးတာက ကျွန်တော် ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာ အလုပ်သွားလုပ်တဲ့အခါ ကနဦး ဖုန်းငှားရမ်းခ၊ ဖုန်းတပ်ဆင်ခဆိုတာ မရှိဘူး။ ပြောချင်သလောက်ပြော ကျသလောက်ရှင်းနည်းနဲ့ သွားတဲ့အတွက် ဖုန်းသုံးနိုင်တဲ့သူပိုများသလို အခွန်လည်း ပိုရတယ်။ ပြီးတော့ Network နဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း တခြားနိုင်ငံတွေမှာက Plan ကြီးချပြီး လုပ်ထားကြတဲ့အတွက် ဘာပြဿနာ မှမတွေ့ရဘူး'' ဟု ပြည်ပနိုင်ငံများတွင် သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်ပြီး ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသူတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။
မိုဘိုင်းဖုန်းအသုံးပြုသူတစ်ဦးလည်း ''ဒီနှစ်ပိုင်းမှာ ဖုန်းချထားပေးတာ များလာပေမယ့် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိပဲ ဖုန်းကိုင်နိုင်ပါသေးတယ်။ ပေးသွင်းရတဲ့ပမာဏကလည်း နိုင်ငံတကာနဲ့ယှဉ်ရင် ပိုမြင့်တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တခြားနိုင်ငံတွေထက်စာရင် ဖုန်းအမျိုးအစား ပိုများတယ်။ ဒါပေမယ့် သုံးစွဲသူက နည်းနေတယ်။ သုံးရတဲ့ အမျိုးအစားထက် သုံးစွဲသူက ၀န်ဆောင်မှုအပေါ် ကျေနပ်နှစ်သိမ့်မှုနဲ့ ပါဝင်အသုံးပြုနိုင်မှုကို ပိုလိုချင်ပါတယ်။ အခုချိန်မှာ ၀န်ဆောင်မှု တိုးမြှင့်ပေးမယ်ဆိုရင်လည်း ဖုန်းအလုံး ရေတိုး မြှင့်ချထားပေးဖို့နဲ့ ဖုန်းဆက်သွယ်မှုကောင်းမွန်ဖို့ကိုပဲ ပိုမျှော်လင့်ပါတယ်''ဟု ထင်မြင်ချက်ပေးပါသည်။
သံယာတော်များ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် (Passport) ပြုလုပ်ကြရာတွင် အခက်အခဲအချို့နှင့်ကြုံတွေ့နေရ
သံဃာတော်များသည် နိုင်ငံကူးလက်မှတ် (Passport) ပြုလုပ်ကြရာတွင် သတ်မှတ်ထားသော ထောက်ခံစာများ ရှိနေမှသာ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် အသစ်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် အဟောင်းများကို သက်တမ်းတိုးမှုများ ပြုလုပ်၍ရသောကြောင့် အချိန်ကြန့်ကြာမှု အခက်အခဲ များနှင့် ကြုံတွေ့နေရကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
သံဃာတော်များ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အသစ်များ ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် အဟောင်းများကို သက်တမ်းတိုးရာတွင် မိမိလက်ရှိ သီတင်းသုံးသော ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်၏ ထောက်ခံစာ၊ မြို့နယ်သံဃနာယက ဆရာတော်၏ ထောက်ခံစာနှင့် မြို့နယ်ရဲစခန်း၏ ထောက်ခံစာ တို့ကိုယူဆောင်ပြီး အထက်သာသနာရေးဌာနရုံးကို တင်ပြရသည်။ ၎င်း သာသနာရေးဌာနရုံးမှ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ပြုလုပ်ခွင့်စာရရှိမှသာ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ပြုလုပ်ရေးဌာနသို့ သွားရောက်ပြုလုပ်နေရကြောင်းလည်း သိရသည်။
''နာဂစ် မဖြစ်ခင်တုန်းကဆိုရင် ဦးဇင်းတို့ Passport လုပ်ရတာ တော်တော်လေး အဆင်ပြေပါတယ်။ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ထုတ်ပေးတဲ့ ရုံးတစ်ခုထဲမှာတင် အပြီးလုပ်လို့ ရတယ်။ အခုဆိုရင် ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ရဲ့ ထောက်ခံစာ၊ မြို့နယ်သံဃာ့နာယက ဆရာတော်ရဲ့ထောက်ခံစာ၊ ရဲစခန်း ထောက်ခံစာတို့ကို အရင်သွားယူရတယ်။ ပြီးတော့မှ အဲဒါတွေကို အထက်သာသနာရေးရုံးကို တင်ပြရတယ်။ အထက်သာသနာရေးရုံးက ပြုလုပ်ခွင့်စာကျမှသာ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ထုတ်ပေးတဲ့ရုံးကို သွားပြီးတော့ ပြုလုပ်ခွင့်ရတာပါ။ အဲဒီလိုပြုလုပ်ရ တာတွေက ဦးဇင်းတို့အတွက်ရော၊ တခြားသံဃာတော်တွေအတွက်ရော အခက်အခဲတွေ ကြုံတွေ့နေရသလို အချိန်လည်း အကြာကြီး စောင့်ရပါတယ်။ အဲဒါတွေကို ပြန်လည်ပြုပြင် ပေးစေလိုပါတယ်''ဟု ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ပန်းပင်ကုန်း(၅)ရပ်ကွက်ရှိ ကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓ၀ိပဿနာ ဗိမာန်ကျောင်းတိုက်မှ ရဟန်းတစ်ပါးက မိန့်ကြားခဲ့သည်။
ချီဖွေ ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်း တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများ စတင်
ချီဖွေ ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ စတင်နေပြီဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ မြစ်ဆုံအထက်မိုင် ၆၀ ခန့် အကွာ မေခမြစ်ပေါ်ရှိ ၃၄၀၀ မဂ္ဂါဝပ် ရှိသော ချီဖွေရေအား လျှပ်စစ်စီမံကိန်းအား ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့တွင် မြေသားလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ခွင့် ရရှိ ခဲ့ပြီး တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ စတင်နေပြီဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
''မေခမြစ်ပေါ်မှာ တည်ဆောက်မှာဖြစ်တဲ့ ချီဖွေ ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းကို စတင်ဖို့ ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့မှာ သဘောတူညီမှု စာချုပ် ချုပ်ဆိုပြီး စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွေ စတင်နေပြီ။ လိုအပ်တဲ့ စက်ယန္တရားတွေလည်း ရောက်နေပါပြီ''ဟု ရေ အားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့် နီးစပ်သည့်အသိုင်းအ၀ိုင်းမှ သိရှိရပါသည်။
သို့ဖြစ်၍ မြစ်ဆုံရေအားလျပ် စစ်စီမံကိန်းမှအပ ကျန်စီမံကိန်း ခြောက်ခုဖြစ်သော ချီဖွေ၊ ၀ူဆောက်၊ ခေါင်လန်ဖူး၊ ယီနန်၊ ဖီဇောနှင့် လိုင်ဇာတို့အား ဆက်လက်လုပ်ဆောင် သွားမည်ဖြစ်ကာ ယခုစတင်သည့် ချီဖွေရေအား လျှပ်စစ်စီမံကိန်းမှာ ပထမဆုံးလုပ်ဆောင်သည့် ရေအား လျှပ်စစ်စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်သည်ဟု သိရှိရပါသည်။
နိုင်ငံခြားဘဏ် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သော မြန်မာဘဏ်များ နိုင်ငံတကာအဆင့် လည်ပတ်နိုင်ပြီးမှသာ
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကိုယ်စားလှယ်ရုံး ဖွင့်လှစ်ထားသော စင်ကာပူအခြေစိုက် UOB ဘဏ်၏ မလေးရှားနိုင်ငံရှိ ဘဏ်ခွဲတစ်ခုကို တွေ့ရစဉ်
မြန်မာနိုင်ငံမှ ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များ၊ အစိုးရပုဂ္ဂလိက ဖက်စပ်ဘဏ် ၁၁ဘဏ်သည် နိုင်ငံခြားဘဏ် လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိထားပြီး အဆိုပါလုပ်ငန်းကို နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ လည်ပတ်နိုင်ပြီးမှသာ ကိုယ်စားလှယ် ရုံးအဖြစ် ဖွင့်လှစ်ထားသော နိုင်ငံခြား ဘဏ်များအနေဖြင့် ဘဏ်ခွဲအဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံတွင် တည်ထောင်လုပ်ကိုင် ခွင့်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဘဏ်လုပ်ငန်း အသိုင်းအ၀ိုင်းမှ သတင်းရရှိသည်။
“အခုပြည်တွင်းဘဏ်တွေ လုပ် ကိုင်ခွင့်တိုးပြီးရလာတယ်။ အရင်က ရခဲ့ဖူးတဲ့ နိုင်ငံခြားငွေ လွတ်လပ်စွာ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခွင့်၊ နိုင်ငံခြားဘဏ်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်၊ အကြွေးဝယ်ကတ်တွေ ထုတ်ဝေခွင့်၊ ရွှေနဲ့စိန်အပေါင်လက်ခံပြီး ငွေထုတ်ချေးခွင့် စတာတွေကို လုပ်ကိုင်ခွင့်ရ လာပါပြီ။ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လည်း ဘဏ်နဲ့ဘဏ်လုပ်ငန်းတွေ နိုင်ငံတကာ အဆင့်လုပ်နိုင်ဖို့ အရေးကြီးနေတာကြောင့် ဒီလိုလုပ်ကိုင်ခွင့်တွေပြန်ပေး တယ်လို့ယူဆတယ်။ နိုင်ငံခြားဘဏ် လုပ်ငန်းအနေနဲ့ ပြောရရင် အရင်လို အစိုးရဘဏ်နှစ်ခု၊ သုံးခုကလုပ်တာ မျိုးမဟုတ်တော့ဘဲ ပြည်တွင်းဘဏ်တွေ လုပ်ခွင့်ရလာတယ်။ ဒါပေမယ့် ၂၀၁၂ မတ်လလောက်မှ နိုင်ငံခြား ဘဏ်လုပ်ငန်းစလုပ်နိုင်မယ်လို့ ထင်တယ်။ ဥပမာ အယ်လ်စီ(ငွေလွှဲစာ တမ်း)ဖွင့်တာမျိုးပေါ့။ လောလောဆယ်ကတော့ ပြည်တွင်းစာရင်း အလွှဲအပြောင်းတွေနဲ့ အပ်ငွေလက်ခံတာလောက်ပဲ လုပ်နိုင်မယ်။ ပြည်တွင်းဘဏ်တွေ အဆင့်မီမီလည်ပတ် နိုင်ပြီဆိုရင်၊ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်း ပြည့်မီပြီဆိုရင် နိုင်ငံခြားဘဏ်ခွဲတွေ တည်ထောင်ခွင့်ပြုသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်”ဟု နိုင်ငံခြားဘဏ်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသော ပုဂ္ဂလိကဘဏ် တစ်ခုမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြော ကြားပါသည်။
နိုင်ငံခြားဘဏ်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်မည့် ပြည်တွင်းဘဏ်များအနေဖြင့် အတွေ့အကြုံအားဖြင့်သော် လည်း ကောင်း၊ နည်းပညာအရ သော်လည်းကောင်း ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းလိုအပ်ချက် ဖြစ်ပေါ်နေသောကြောင့် နိုင်ငံခြား ဘဏ်များကို ကိုယ်စားလှယ်ရုံးအဖြစ်သာ ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပေးနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ အဓိကအချက်မှာ နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေး ဦးတည်ချက် တစ်ရပ်ဖြစ်သော ‘နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေးတစ်ရပ်လုံးကို ဖန်တီးနိုင်မှုစွမ်းအားသည် နိုင်ငံတော်နှင့် တိုင်းရင်းသားပြည်သူတို့ လက်ဝယ်တွင်ရှိရေး’ ဆိုသည်နှင့်အညီ ပြည်တွင်းဘဏ်များ၏ လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ပြည့်ဝမှသာ နိုင်ငံခြားဘဏ်များ အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဘဏ်ခွဲ တည်ထောင်ခွင့်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း တာဝန်ရှိသူများ၏ ထုတ်ပြန် ပြောကြားမှုများအရ သိရပါသည်။
“ဘဏ်ကိုယ်စားလှယ်ရုံး ဖွင့်လှစ်ထားတာကြာပါပြီ။ ၁၉၉၀ ကျော် ကတည်းကပါ။ အခုထိလည်း ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။ မြန်မာပြည်က အနာဂတ်အရ ဆက်ဖွင့်ထားဦး မှာပါ။ လောလောဆယ် ဘဏ်ကိုယ်စားလှယ်ရုံးတွေထက် အာမခံကိုယ်စားလှယ်ရုံးတွေက ပိုအလုပ်ဖြစ်လာတယ်။ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် ရတဲ့အထိ စောင့်ရဦးမှာပေါ့”ဟု နိုင်ငံခြားဘဏ်လုပ်ငန်းတစ်ခု၏ တာဝန်ခံတစ်ဦးက ရှင်းပြပါသည်။
လက်ရှိလုပ်ကိုင်နေသော နိုင်ငံခြားဘဏ် ကိုယ်စားလှယ်ရုံးများ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ ဘဏ်လုပ်ငန်း နှင့် ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာ သတင်း အချက်အလက်များ ကောက်ယူ စုဆောင်းခြင်း၊ ဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းထုတ်ပြန်ခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်း၊ ပြဋ္ဌာန်းခြင်း များစသည်တို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရုံးချုပ်ထံ အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း၊ ပင်ရင်းနိုင်ငံမှ လုပ်ငန်းများအတွက် ပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ အစိုးရနှင့်လုပ်ငန်းအကြား ချိတ်ဆက် ညှိနှိုင်းပေးခြင်း စသည်တို့ ပါဝင်ကြောင်း သိရပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံခြားဘဏ် ကိုယ်စားလှယ်ရုံးခွဲ ဖွင့်လှစ်မှုမှာ ၁၉၉၇ ခုနှစ် အာရှစီးပွားရေးအကျပ် အတည်းမတိုင်မီအထိ ၄၉ ဘဏ် လာရောက်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး အာရှစီးပွားရေး အကျပ်အတည်းပြီး နောက်ပိုင်း နှင့် ၂၀၀၃ ခုနှစ်ပိတ်ဆို့မှု ဖြစ်စဉ်များကြောင့် ဘဏ်အများအပြား ပြန်လည် ထွက်ခွာသွားကာ ၂၀၁၁ ခုနှစ် မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့ စာရင်းအရ ဘဏ်ကိုယ်စားလှယ်ရုံး ၁၄ ရုံးသာ ကျန်ခဲ့သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်လည်း ဘဏ်လုပ်ငန်းပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ဆောင်ရွက်နိုင်သည်ဟု နိုင်ငံခြားဘဏ်များက မျှော်မှန်းလျက် ရှိကြောင်း သိရပြီး ယခု ၂၀၁၁ ခုနှစ် နှစ်မကုန်ဆုံးမီတွင် ကိုယ်စားလှယ်ရုံး ဖွင့်လှစ်ထားသော နိုင်ငံခြားဘဏ်မှာ ၃၀ကျော် အထိရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၁ ရက်နေ့မှစ၍ ဏ အက္ခရာ ကားဟောင်းများ အပ်နှံမှု စတင်လက်ခံမည်
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၁ ရက်နေ့မှစ၍ ဏ အက္ခရာကား ဟောင်းများကို အပ်နှံမှုကို စတင် လက်ခံသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရထား ပို့ဆောင်ရေး ၀န်ကြီးဌာန ပြောရေးဆို ခွင့်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့ပါ သည်။
ယခုအခါတွင် ည အက္ခရာ ကားဟောင်းများအပ်နှံမှုမှာ ပြီးစီးလု ပြီဖြစ်ကြောင်း၊ ည အက္ခရာကား ဟောင်းများအပ်နှံမှုပြီးစီးနှင့်သည် ဏ အက္ခရာကားဟောင်းများကိုအပ် နှံခွင့်ပြုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဏ အက္ခရာကားဟောင်းများပြီးသည် နှင့် ထ အက္ခရာကားဟောင်းများကို ထပ်မံ၍ အပ်နှံမှုလက်ခံသွားမည်ဖြစ် ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
“လာမယ့် ဇန်န၀ါရီလ ၁ ရက် နေ့က စပြီး ဏ အက္ခရာကား ဟောင်းတွေကို အပ်နှံမှု စတင်လက် ခံပါမယ်။ ကျွန်တော်တို့ ရထားပို့ ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကို ဖြေကြားပေးနေတဲ့အတွက် ဆက်သွယ် ပြီးတော့လဲ တိကျတဲ့ သတင်းတွေကိုပဲ ရယူစေချင်ပါတယ်။ တစ်ချို့အပြင်က သတင်းတွေက ကွဲလွဲနေလို့ပါ။ ကျွန်တော်တို့ တောက်လျှောက် ဖြေကြားပေးနေပါတယ်” ဟု ရထား ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ကားဟောင်းများ အပ်နှံထားမှုမှာ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့အထိ ၂၂၀၀၀ ကျော် အပ်နှံပြီးစီးပြီ ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ယခုနောက်ပိုင်း ကားဟောင်း အပ်နှံမှုများမှာ ရက်အလိုက် ပျမ်းမျှအပ်နှံနိုင်မှုနှုန်းမှာ လျော့နည်း သွားကြောင်းလည်းသိရသည်။
ယခင်စတင်စဉ်က တစ်ရက် လျှင် အစီးရေ ပျမ်းမျှ ၄၀၀ ကျော် အပ်နှံခဲ့ရာမှ ယခုအခါ တစ်ရက်လျှင် ပျမ်းမျှအစီးရေ ၂၀၀ ကျော်သာ အပ်နှံမှုပြုလာကြောင်းလည်း သိရသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံသို့ မြန်မာအပါအ၀င် ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားများ ၀င်ရောက်လည်ပတ်မှု ပုံမှန်အနေအထားသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိ
ထိုင်းနိုင်ငံသို့ မြန်မာလူမျိုး များအပါအ၀င် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများ ၀င်ရောက်မှု ပုံမှန်အနေအထား သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံသည် နှစ်ပေါင်းများစွာ အတွင်း အဆိုးရွားဆုံးသော ရေကြီးမှုများကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ရကာ စီးပွားရေးအရ ဆုံးရှုံးမှုများ၊ လူသေဆုံးမှု များကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ရကြောင်း၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းကို အဓိကထားလုပ်ကိုင်ရာ ဘန်ကောက်မြို့သို့ ရေ၀င်ရောက်မှု များရှိလာသည့်အတွက် ခရီးသွား အ၀င်ကျဆင်းမှု ပုံမှန်ထက်လျော့ကျ ခဲ့ရကြောင်း သိရှိရသည်။
“အခုတော့ ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်နေပါပြီ။ ဘန်ကောက်မြို့ပေါ်မှာလည်း ရေမရှိတော့ဘူး။ ပြည်နယ်တချို့ မှာတော့ ကျန်နေသေးတယ်။ အများစုကတော့ ရေကျပါပြီ။ ခရီးသွား အ၀င်က ပုံမှန်ပါပဲ။ ဘန်ကောက်က ခရီးသွားအလာများတဲ့ နေရာတွေမှာ ပုံမှန်ခရီးသွားရှိနေတာကို တွေ့ရပါတယ်”ဟု ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့နေ မြန်မာလူမျိုးတစ်ဦးက ပြောပြသည်။
မြန်မာလူမျိုးများ ပြည်ပသို့ခရီးစဉ်များ စီစဉ်ထွက်ခွာမှုတွင် ထိုင်းနိုင်ငံသည် သွားရောက်မှု အများဆုံးဖြစ်ပြီး ဘန်ကောက်မြို့မှာ အဓိက ခရီးစဉ်ဒေသတစ်ခု ဖြစ်သည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ လအတွင်းက ထိုင်းနိုင်ငံသို့ သွားရောက်ရန် စီစဉ်ထားသည့် မြန်မာလူမျိုး များ၏ ခရီးစဉ်များ နိုဝင်ဘာလသို့ ရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ကြောင်း၊ တစ်ဖန် ဒီဇင်ဘာလအတွင်းသို့ ပြန်လည်ရွှေ့ ဆိုင်းခဲ့ပြီး ယခုအခါတွင် ခရီးသွား သွားရောက်မှု ပုံမှန်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
“ဘန်ကောက်ခရီးစဉ်တွေက ပုံမှန်ဖြစ်နေပါပြီ။ စင်ကာပူကိုလည်း အသွားများတယ်။ အခေါက်ရေတိုးပြီး ပြေးဆွဲနေရပါတယ်” ဟု MAI မှ Marketing Manager မအေးမရသာ က ပြောပြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသားများ ပြည်ပ ခရီးစဉ်များ ထွက်ခွာလည်ပတ်မှုသည် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းတွင် ပိုမို လာခဲ့ကာ ထိုင်း၊ စင်ကာပူ၊ မလေး ရှားနိုင်ငံများသို့ သွားရောက်မှု အများဆုံးဖြစ်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ခရီးသွားကုမ္ပဏီများနှင့် လေကြောင်း လိုင်းများမှ Package Tour စီစဉ်မှု များ များပြားလာသည့်အတွက် ခရီး သွား သွားရောက်မှု ပိုမိုတိုးတက်လာခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံသို့ လက်ရှိတွင် ပြင်သစ်၊ ဂျာမန်၊ ရုရှား စသောခရီးသွားများ အပါအ၀င် အာရှနိုင်ငံများထဲမှ တရုတ်၊ ကိုရီးယား၊ ဂျပန် စသည့် ခရီးသွားများလည်း လာရောက်မှုရှိနေသည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွင်း ကမ္ဘာနှင့်အနီးဆုံး ဆုံမှတ်သို့ အင်္ဂါဂြိုဟ် ရောက်ရှိ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး တွေ့ဆုံ
မြန်မာ-အင်ဒိုနီးရှား နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ပူးတွဲကော်မရှင်၏ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးကို ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဆီဒိုးနား ဟိုတယ်၌ ဒီဇင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့က ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ထိုအစည်းအဝေးသို့ အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမာတီနာတာလီဂါဝါ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး အဆိုပါနေ့ မွန်းလွဲ ၃ နာရီတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်သို့ သွားရောက်ခဲ့ပြီး သီးခြားတွေ့ဆုံခဲ့ကာ ညနေ ၄ နာရီ ၃၀ မိနစ်တွင် ဆီဒိုးနားဟိုတယ်၌ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
''မြန်မာနိုင်ငံကို အောက်တိုဘာလအတွင်းက လာရောက်ခဲ့ပြီး အခုနောက်တစ်ကြိမ် လာရောက်တာပါ။ အောက်တိုဘာမှာလာခဲ့တုန်းက အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ အဆင်သင့်ဖြစ်၊ မဖြစ်ဆို တာကို လေ့လာဖို့ လာရောက်ခဲ့တာပါ။ ဒီတစ်ခါလာရောက်ချိန်မှာတော့ မြန်မာ-အင်ဒိုနီးရှား နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပူးတွဲကော်မရှင် ရဲ့ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် အစည်း အဝေးအတွက် လာခဲ့တာပါ။ ပထမ အစည်းအဝေး ကိုတော့ ၂၀၀၇ ခုနှစ် မှာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ နှစ်နိုင်ငံကြား ဆက်ဆံရေးကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် နဲ့ ဆက်ဆံရေး တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက် နိုင်မှုအလားအလာတွေကို ခန့်မှန်းရန် ပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်'' ဟု အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမာတီနာတာလီဂါဝါက မီဒီယာများသို့ ပြောကြားခဲ့သည်။
မြန်မာ-အင်ဒိုနီးရှား နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ပူးတွဲကော်မရှင်၏ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေး၌ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အင်ဒိုနီးရှား နှစ်နိုင်ငံကြား ကုန်သွယ်မှုကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်အရောက်တွင် သန်း ၅၀၀ ပြည့်မီရေး အတွက် ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်ဟု သိရ သည်။ ထိုသို့ နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှု မျှော်မှန်းချက်ပြည့်မီရေးနှင့်အတူ ၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွင်းသစ်တော၊ လယ်ယာ၊ မွေးမြူရေး၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ အိုင်စီတီနှင့် ဘဏ်လုပ်ငန်း ကဏ္ဍများတွင် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ပြီး စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေး အစီအစဉ်များ ပြု လုပ်မည့် အကြောင်းအရာများကိုလည်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထို့အပြင် ရန်ကုန်-ဂျကာတာ တိုက်ရိုက်လေကြောင်းလိုင်း ပျံသန်းရေးကိစ္စရပ်ကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွင်း စတင်သွားမည့် အစီအစဉ်လည်း ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။ ထို့ပြင် နှစ်နိုင်ငံကြား ခရီးသွားလာရေးကဏ္ဍကို မြှင့်တင် သည့်အနေဖြင့် ပုဂံနှင့် Borobudur ခရီးသွား လာရေး မြှင့်တင်မှုအစီအစဉ်များကို ပူးတွဲဆောင်ရွက်သွားရန် စီစဉ်ထားကြောင်းလည်း သိရသည်။ အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမာတီနာတာလီဂါဝါက မြန်မာနိုင်ငံရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး သီးခြားပြောဆိုခဲ့ရာတွင် ဒီမိုကရေစီ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် မြန်မာအစိုးရ၏ လုပ်ဆောင်မှုများမှာ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ရလဒ်ထွက်ပေါ်ခဲ့သော်လည်း ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားရန်များ ရှိနေသေးကြောင်း၊ ဒီမိုကရေစီဖြစ်ထွန်းရေးဆိုသည်မှာ ဖြစ်ရပ်တစ်ခု မဟုတ်ဘဲ အစဉ်အဆက် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားရမည့် ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
၄၅ မိနစ်ခန့် ကြာမြင့်ခဲ့သည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံရာတွင် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ဆောင်နေမှုများနှင့် ဒီမိုကရေစီဖြစ်ထွန်းရေး ဆောင်ရွက်နေမှုများကို ထောက်ခံ သွားမည်ဆိုသည့် အကြောင်း၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ဆောင်နေမှုများနှင့် ဒီမိုကရေစီ ဖြစ်ထွန်းရေးဆောင်ရွက်နေမှုများ ပိုမိုတိုးတက်လာစေရန် စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေး အစီအစဉ်များ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ သိရှိနား လည်ခဲ့သော သင်ခန်းစာများနှင့် အတွေ့အကြုံများကို ဝေမျှခြင်းဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ မိတ်ဖက်တစ်ဦးအဖြစ် ဆောင်ရွက်သွားမည့်အကြောင်းတို့ကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမာတီနာတာလီဂါဝါက ပြောကြားခဲ့သည်။
အထက်ဗဟိုလမ်း မရမ်းကုန်း ၂ ရပ်ကွက် ၊ သာကူစေ့စက်ရုံ ၄နာရီ ၁၅ မိနစ်မှစ၍ မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားရာ ၅ နာရီအချိန်တွင် မီးငြိမ်းသတ်နိုင်ပြီဖြစ်သည်။ အနီးရှိရပ်ကွက်မှာ လူနေအိမ်ခြေစိပ်သည့် လူနေရပ်ကွက်ဖြစ်သည်။ မီးသတ်ကား ၆ စီး ၇ စီး လာရောက်သည်ကိုတွေ့ရသည်။
ဆူပါကပ်စတန် ၁ စီး ဒိုင်နာ၁ စီး မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့သည်။ စက်ရုံအ၀င်ဝတွင် အနားကပ်လျက်တိုက် ပြူတင်းပေါက်မှန်ကွဲ အပျက်အစီးများ တွေ့ရှိရသည်။
မီးလောင်မှု အကြောင်းရင်းမှာ ၆ နှစ်နှင့် ၈ နှစ်အရွယ် ကလေးနှစ်ဦး ဂက်စ်မီခြစ်ဆော့ရာမှ လောင်ကျွမ်းခြင်း ဖြစ်သည်ဟု မီးသတ်တာဝန်ရှိသူများက ပြောသည်။
မီးလောင်ခါစတွင် စက်ရုံအတွင်းမှ ပေါက်ကွဲသံများက ကြားရသည်ဟု အိမ်နီးချင်း မျက်မြင်သက်သေကပြောဆိုသည်။ ပိုင်ရှင်က မော်တော်ယာဉ် ဆုံးရှုံးမှု မပါဝင်သေးပဲ အတွင်းပစ္စည်း သိန်း ၁၃၀ ကျော်ဖိုး ဆုံးရှုံးသွားသည်ဟု ပြောဆိုသည်။ မီးလောင်သွားသည့် စက်ရုံမှာ နှစ်ထပ် အဆောက်အဦဖြစ်သည်။
မီးသတ်နှင့် ရဲများ မေးမြန်းစစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်သည်။
မလေးရှားဆေးကျောင်းသား ၏ လိင်တူလက်ထပ်ပွဲ အား မလေးလူမျိုးများ မှ လက်မခံနိုင်ကြသေး
Tuesday, December 27, 2011 လပြည့်ဝန်း No comments
အိုင်ယာလန်နိုင်ငံတွင် ၄င်း၏ချစ်သူအမျိုးသားနှင့်လက်ထပ်ခဲ့သော မလေးရှားနိုင်ငံသားတဦး၏
လက်ထပ်ပွဲအား အွန်လိုင်းပေါ်တွင် ဒေါသတကြီးနှင့် တုန့်ပြန်မှုများရှိလာခဲ့ပြီး Facebook ပေါ်ရှိအဖွဲ့တခုမှ အဆိုပါမလေးရှားနိုင်ငံသားအား မလေးရှားနိုင်ငံသို့ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာပြီး
ကယ်တင်ရန်တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ မည်သို့မည်ပုံကယ်တင်မည်ကိုကား မသိရသေးပေ။
လွန်ခဲ့သောသုံးနှစ်ကတည်းက ပျောက်ဆုံးနေခဲ့သည်ဟု ၄င်း၏မိသားစုမှ သတင်းပို့ထားသော
မလေးရှားနိုင်ငံသားဖြစ်သူ ဒပ်ဘလင်ဆေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား အာရစ်ဖ်အယ်လ်ဖီယန်ရိုစလီ
(Ariff Alfian Rosli) ၏ လိင်တူလက်ထပ်ပွဲမှ ဓါတ်ပုံများ ယခင်အပတ်က အင်တာနက်ပေါ်သို့
ဓါတ်ပုံများ၌ အနက်ရောင်ရိုးရာအင်္ကျီနှင့်မလေးအမျိုးသားဝတ်စုံအား ဝတ်ဆင်ထားသော အသက်
(၂၈) ပြီဖြစ်သော အာရစ်ဖ်အယ်လ်ဖီယန်ရိုစလီ အား အနက်ရောင်တပ်ခ်စီဒိုပွဲတက်ဝတ်စုံအား ဝတ်
ဆင်ထားသည့် ဂျိုနသန် (Jonathan) ဟုသာသိရသော ၄င်း၏သတို့သား/သမီး နှင့်အတူတွေ့ရသည်။
ဝန်ကြီးချုပ်နာဂျစ်ဘ်၏ဝန်ကြီးချုပ်ရုံးမှလည်း အဆိုပါမင်္ဂလာပွဲနှင့်ပတ်သက်ပြီး စုံစမ်းစစ်ဆေးမည်
ဟုဆိုခဲ့သည်။ အမ်နိုပါတီအရာရှိတဦးလည်း အာရစ်ဖ်အယ်လ်ဖီယန်ရိုစလီ အား အိမ်ပြန်လာဖို့
သွေးဆောင်ရန် အိုင်ယာလန်နိုင်ငံ၊ ဒပ်ဘလင်မြို့သို့ယခုပတ်အတွင်း ရောက်ရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းရသည်။
လွန်ခဲ့သော (၈) နှစ်ခန့်တွင် ပက်ထရိုနတ်စ်ပညာသင်ဆု (Petronas Scholarship) ဖြင့် ဆေးပ
ညာသင်ရန် ဒပ်ဘလင်မြို့သို့ ထွက်ခွာသွားသော အာရစ်ဖ်အယ်လ်ဖီယန်ရိုစလီမှ ၄င်း၏ကိစ္စမှာ
သာမန်လူမှုရေးလား၊ လိင်တူလက်ထပ်ခြင်းလား ဖြေဆိုရန်ငြင်းပယ်ခဲ့သည်။
မိမိအနေနှင့် မမျှော်လင့်ပဲ အများအာရုံစိုက်မှုကိုခံနေရသော်လည်း အခြားမည်သူ့ကိုမှ စိတ်
အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေခြင်း၊ ဒုက္ခပေးခြင်း မပြုလိုခဲ့ပါဟု အာရစ်ဖ်အယ်လ်ဖီယန်ရိုစလီမှ
ဆိုသည်။ ၄င်းအနေနှင့် ဘာသာပြောင်းသွားခဲ့ပြီဆိုသော သတင်းများနှင့်ပတ်သက်၍မူ ဘာ
ထို့ပြင် မိမိသည်ပျောက်ဆုံးနေခြင်း မဟုတ်ပဲ မိမိအနေနှင့် အိုင်ယာလန်နိုင်ငံတွင် တရားဝင်
နေထိုင်နေခြင်းအား အိုင်ယာလန်အစိုးရနှင့် မလေးရှားအစိုးရတို့အနေနှင့် နှစ်အတန်ကြာက
တည်းက သိရှိထားကြပြီးဖြစ်သည်ဟု ၄င်းမှဆိုသည်။
၄င်းအနေနှင့် မိသားစုနှင့်လည်း ပုံမှန်ဆက်သွယ်မှုရှိနေခဲ့သော်လည်း အငြိမ်းစားရေတပ်အရာရှိ
တဦးဖြစ်သူ ဖခင်နှင့်မူ (၂၀၀၉) ခုနှစ်တွင် အချေအတင်ဖြစ်ထားခဲ့ချိန်မှစပြီး စကားပြောဆိုမှုမရှိ
ပါဟု အာရစ်ဖ်အယ်လ်ဖီယန်ရိုစလီမှဆိုသည်။ ပက်ထရိုနတ်စ်ရေနံကုမ္ပဏီမှ အာရစ်ဖ်အယ်လ်ဖီ
ယန်ရိုစလီအား ပညာသင်စရိတ်ထောက်ပံ့ခြင်းအား (၂၀၀၉) ခုနှစ်တွင် ရပ်ဆိုင်းခဲ့ပြီး ကုမ္ပဏီမှ
၄င်းအတွက်ထောက်ပံ့ခဲ့သော ပညာသင်စရိတ် ရင်းဂစ် (၈၉၀၀၀၀) အားပြန်လည်ပေးဆပ်ရန်
source - Freedom News Group
Selangor ။ ။ သင် ဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်ချိန် ရဲကို စကားတစ်ခွန်းမှ မပြော ဆိုရဘဲ ချက်ချင်းခေါ်နိုင်ဖို့ လိုအပ်နေပါ သလား၊ HELP! (SOS) ဟူသော ခလုတ်လေး တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရုံနှင့် သင်မည်သည့် နေရာ တွင် ရှိနေနေ ရဲမှ ချက်ချင်းရှာဖွေနိုင် မည် ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ အသုံးချ ဖုန်းဆော့ဖ်ဝဲ လေးအား ဆီလန်ဂေါရဲဌါနမှ ဖန်တီးခဲ့ပြီဖြစ် သည်။
Tadeusz Górny, via Wikimedia Commons
ရိုမန်ကက်သလစ် ခရစ်ယာန် သာသနာပိုင် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဘင်နဒစ် (Benedict XVI)။
မနေ့က ဘာတီကန်နန်းတော် စိန့်ပီတာရင်ပြင်မှာ ဟောပြောတဲ့ ခရစ္စမတ် သဝဏ်လွှာမှာ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဘင်နဒစ် (Benedict XVI) က ဆီးရီးယားနိုင်ငံမှာ အကြမ်းဖက်မှုတွေ ပြီးဆုံးအောင် ဆုတောင်းခဲ့ သလို မြန်မာနိုင်ငံမှာ အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမှုတွေ ပိုဖြစ်ပေါ်လာဖို့၊ ထိုင်းနိုင်ငံက ရေဘေးသင့်ပြည်သူ တွေ၊ အာဖရိကဒေသက ဒုက္ခသည်တွေအရေးနဲ့ ပါလက်စတိုင်း-အစ္စရေး ဆွေးနွေးပွဲတွေ ပြန်လည် ကျင်းပနိုင်ရေးတွေကိုလည်း ထည့်သွင်း ဆုတောင်းခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
သက်တော် ၈၄ နှစ်အရွယ် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးဟာ ခရစ္စမတ် သဝဏ်လွှာကို စိန်ပီတာရင်ပြင်မှာ ကိုယ်တိုင် ဟောပြောအပြီး ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးရဲ့ ပြန်ကြားရေးဌာနက ဘာသာစကား ၆၅ မျိုးနဲ့ ပြန်လည် ဖြန့်ဝေခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ခရစ်တော် ဖွားမြင်တဲ့ အထိမ်းအမှတ် နေ့ရက် အခမ်းအနားတွေကနေ ကမ္ဘာတလွှား အခက်အခဲ ပေါင်းစုံ ခံစားနေရသူတွေကို ဆင်းရဲခြင်းက ကင်းလွတ်အောင်လည်း ဆုတောင်းခဲ့တယ်လို့ ဗာတီကန်က လာတဲ့ သတင်းတွေမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ပညာရေး ရန်ပုံငွေ ဂီတပွဲတော် ဒီဇင်ဘာလ ၃ဝ မှာ ကျင်းပမယ်
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ပညာရေး ရန်ပုံငွေအတွက် ပြုလုပ်မည့် ဂီတ ဖျော်ဖြေရေးနှင့် ဈေးရောင်းပွဲတော် မြေစိုက်ကြော်ငြာပုံ ဖြစ်ပါသည်။
တိုင်းရင်းသားဒေသတွေအတွက် ပညာရေး ရန်ပုံငွေ စင်တင်တေးဂီတပွဲတော်ကို လာမယ့် ဒီဇင်ဘာလ ၃၀ မှာ ကျင်းပမှာဖြစ်ပြီး မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဖွင့်လှစ် အမှာစကား ပြောကြားပါမယ်။
ဂီတပွဲတော်ကို မရမ်းကုန်းမြို့နယ် မင်းဓမ္မကုန်းမှာရှိတဲ့ Myanmar Convention Center (MCC) မှာ ကျင်းပပါမယ်။ မနက် ၁ဝ နာရီလောက်ကတည်းက ဈေးရောင်းပွဲတော်နဲ့ စတင်ဖွင့်လှစ်ပြီး ညဉ့်နက်ပိုင်းအထိ ကျင်းပမယ်လို့ ပွဲဖြစ်မြောက်ရေး တာဝန်ယူထားသူ တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ကိုဖြိုးမင်းသိန်းက ပြောပါတယ်။
ပညာရေး ရန်ပုံငွေ စင်တင်ဂီတပွဲတော် လက်မှတ်စုစုပေါင်း တစ်သောင်းလောက် ရောင်းဖို့ လျာထားပြီး တစ်စောင်ကို ၃ သောင်း၊ ၂ သောင်း၊ ၁ သောင်း၊ ၅ ထောင်နှုန်း အသီးသီး သတ်မှတ်ပြီး ရောင်းချနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ရတဲ့ ရန်ပုံငွေအားလုံးကို တိုင်းရင်းသားနယ်မြေတွေက ကလေးတွေ ပညာရေးအတွက် တိုက်ရိုက် လှူဒါန်းသွားမယ်လို့ ကိုဖြိုးမင်းသိန်းက ပြောပါတယ်။
“တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ အရေးကိစ္စကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မေ့ပျောက်မထားဘူး၊ အစဉ်တစိုက် ကြိုးပမ်းနေတယ် ဆိုတာကို ဒီကိစ္စမှာလည်း တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ရင်သွေး ကလေးငယ်တွေရဲ့ ပညာရေးအတွက် ဒီရန်ပုံငွေကို သုံးစွဲမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တိုင်းရင်းသားနယ်မြေတွေထဲက အခက်အခဲရှိတဲ့ နေရာတွေကို ကျနော်တို့ကိုယ်တိုင် ကွင်းဆင်းလေ့လာပြီး အဲဒီလူတွေရဲ့ လက်ထဲကို တိုက်ရိုက်လှူဒါန်းသွားမှာပါ”
ဒီဇင်ဘာလ ၃ဝ ဂီတဖျော်ဖြေပွဲမှာ Emperor၊ Metal Zone ၊ Big Bag စတဲ့ နာမည်ကြီး တီးဝိုင်း ၁၂ ခုက တီးခတ်ကြပြီး အဆိုတော် ၅ဝ နီးပါးလောက် ပါဝင် သီဆိုကြမှာပါ။ ဖျော်ဖြေပွဲကို အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ခေါင်းဆောင်တွေ၊ သံရုံးအသီးသီးက ဧည့်သည်တွေကိုလည်း ဖိတ်ကြားထားပါတယ်။ လုံခြုံရေးကို ပုဂ္ဂလိက လုံခြုံရေးကုမ္ပဏီ တစ်ခုက ဝန်ထမ်း ၅ဝ ကူညီမှာဖြစ်သလို သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင် အဆင့်ဆင့်ထံလည်း အကူအညီတောင်းဖို့ စီစဉ်နေတယ်လို့ ကိုဖြိုးမင်းသိန်းက ပြောပါတယ်။
ပါရမီ ယာဉ်မောင်းများ၏ တောင်းဆိုချက် ဦးပိုင်လိုက်လျော
ရန်ကုန်၊ ချင်းမိုင်(မဇ္ဈိမ) ။ ။ စစ်ဗိုလ်ချုပ်များ ဦးစီးထားသည့် မြန်မာ့စီးပွားရေး ဦးပိုင် လီမီတက်က ‘ပါရမီ’ တက္ကစီ အငှားယာဉ်မောင်းများအပေါ် တင်းကြပ်ထားသည့် စည်းမျဉ်းများကြောင့် ယာဉ်မောင်းများက ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုတော့ မည် အရေးနှင့် ရင်ဆိုင်လိုက်ရပြီး အရေးပေါ် အစည်းအဝေးခေါ်ကာ ညှိနှိုင်း သဘောတူပေးခဲ့ရ သည်။
တင်းကြပ်မှုများကို မခံနိုင်ကြသဖြင့် ‘ဗန္ဓုလ’ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အောက်ရှိ ပါရမီယာဉ်မောင်းများက စုဖွဲ့ကာ ဒီဇင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့တွင် ဆန္ဒပြတောင်းဆိုရန် ပြင်ဆင်ခဲ့မှုမှာ သတင်းပေါက်ကြားခဲ့ပြီး ၁၃ ရက်နေ့တွင် ဦးပိုင် လီမိတက်က ယာဉ်မောင်းများကို အရေးပေါ် အစည်းအဝေးတရပ် ခေါ်ယူခဲ့သည်။ တောင်းဆိုချက်များကို ဦးပိုင် ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ဇော်ဦးကို တင်ပြကာ ၂၃ ရက် နေ့က အစည်းအဝေးတွင် စည်းကမ်း ပြင်ဆင်ချက်ကို ထုတ်ပြန်ပေးခဲ့သည်။
ပါရမီယာဉ်မောင်းများအပေါ် ချမှတ်ထားသော ယခင်က လဆန်း ၃ ရက် နေ့နောက်ဆုံး ထားပေးသွင်းရမည့် လစာ ကို ၇ ရက်နေ့ထိ တိုးမြင့်ပေးခဲ့သလို ၃ ရက်နေ့ လစာ မပေးလျှင် ကားသော့သိမ်းခြင်းကို ၁၅ ရက်နေ့ထိ လျှော့ပေါ့
ပေးခဲ့သည်။ တရက်လျင် လက်ဗွေ သုံးကြိမ် နှိပ်ရမယ့်အစားကို နေ့လည်တကြိမ် လျှော့ချပေးခဲ့သလို ယခင်က မနက် ၆ နာရီ ယာဉ်ထုတ်ချိန်အစား တနာရီ စောထုတ်ယူခွင့်ပေးခဲ့ပြီး ယာဉ်သိမ်းချိန်ကိုလည်း တနာရီ နောက်ကျ သိမ်းခွင့် ထိ လျှော့ချပေးခဲ့သည်။
“တနေ့ကို သုံးကြိမ် ဘယ်နေရာကရောက်ရောက် ပါရမီကားဝင်းကို ပြန်လာပြီး လက်ဗွေနှိပ်ဖို့ ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဘူး ဗျ။ နောက်ဆုံး အစည်းအဝေးက ဆုံးဖြတ်တာ တနေ့ သုံးကြိမ် မထိုးရတော့ဘူးဗျ၊ တနေ့ နှစ်ကြိမ်ပဲ အဝင်နဲ့ အထွက် ထိုးရမယ်။ နေ့လည် ပြန်လာထိုးပေးဖို့ မလိုတော့ဘူး” ဟု ပါရမီယာဉ်မောင်း ဦးစော က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ယာဉ်မောင်းများ၏ တောင်းဆိုချက်များထဲတွင် နယ်ကျော် မောင်းနှင်ကြေးအား လျှော့ချပေးရန်၊ အငှားယာဉ်၏ စပေါ်ငွေကို ကျပ် ၁၅ သိန်းမှ ၁၀ သိန်းသို့ လျှော့ပေါ့ပေးရန်၊ ဦးပိုင်သို့ လစဉ် ပေးသွင်းရနေရသည့် အငှားယာဉ်ကြေး ကျပ်လေးသိန်းကို သုံးသိန်းထိ လျှော့ချပေးရန်နှင့် ယာဉ်ပြေးဆွဲချိန်ကို ပြန်လည် ညှိနိုင်းပေးရန် ပါရှိသည်။
အဆိုပါ တောင်းဆိုချက်များထဲက စပေါ်ငွေများ လျှော့ချပေးရေးနှင့် လစဉ်ငွေ လျှော့ချရေးတို့ကို ဦးပိုင် လိုက်လျော ချက်များတွင် မပါရှိသေးပေ။ သို့သော်လည်း အခြေအနေအရ လျှော့ချပေးနိုင်ရန် စီစဉ်လျက်ရှိကြောင်း ဦးပိုင် လီမီတက် မှ ထိပ်ပိုင်းတာဝန်ရှိသူ တဦးက ပြောသည်။
လျှော့ချပေးချက်များထဲက တခုဖြစ်သည့် မူလက နယ်ကျော် မောင်းနှင်ကြေး ၁၀၀၀၀ ကျပ်ကို ၅၀၀၀ ကျပ်သို့
လျှော့ချပေးခဲ့သော်လည်း နယ်မြေအကန့်အသတ် ပိုကျဉ်းသွားကြောင်း ယာဉ်မောင်းများက ပြောသည်။
“အရင်တုန်းက ပြည်လမ်းဆိုရင် တိုက်ကြီး၊ မန္တလေးလမ်းဆိုရင် အင်းတကော်ပေါ့။ အဲဒီနေရာတွေကို ကျော်လို့ မရတော့ဘူး။ အရင်တုန်းက တသောင်းပေးတယ်ဆိုတာက ပဲခူးထိ ရတယ်လေ။ ဒီလို ကန့်လိုက်တဲ့ အခါကြတော့ ဒါဟာ ဖြေလျော့တာ မဟုတ်ပဲနဲ့ ပိုတင်းကြပ်လိုက်သလို ဖြစ်သွားတာကိုး။ အခု ပဲခူး၊ အင်းတကော် သွားချင်တယ်ဆို ချက်ချင်းလိုက်လို့ မရတော့ဘူး” ဟု ယာဉ်မောင်း တဦးက ပြောသည်။
ယခင်က နယ်ကျော် မောင်းနှင်မည်ဆိုပါက သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ခံကို ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ပြောဆို၍ ရသော်လည်း ယခုအခါတွင်မူ လျှောက်လွှာ တရက် ကြိုတင်ရမှာဖြစ်ပြီး ခွင့်ပြုချက်ရမှ ခရီးသည် လိုက်ပါ ပို့ဆောင်ခွင့်ရမည်
စစ်အရာရှိများ ကြီးစိုးသော ပါရမီယာဉ်လိုင်းမှ တက္ကစီများသည် မြို့တွင်းရှိ အခြားသော ယာဉ်လိုင်းများထက် ခရီးသည် အကြိုက်၊ ယာဉ်မောင်းများ အကြိုက်တွေ့သဖြင့် အသုံးပြုလိုကြသော်လည်း ကားရရန်အတွက် တပ်အရာရှိ များကို အကပ် ယူရကြောင်း ပါရမီ ယာဉ်မောင်းတို့က ပြောသည်။
စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန အောက်ရှိ အငှားယာဉ်များသည် ပါရမီ ကားများကဲ့သို့
ကောင်းမွန်ခြင်း မရှိသော်လည်း နေ့စဉ် ပြန်ပို့စရာ မလိုဘဲ အိမ်၌ ယူထားကာ တလတကြိမ်သာ စစ်ဆေးရန် ပို့ဆောင်ရသလို စပေါ်ငွေ ၈ သိန်းနှင့် လစာ ၄ သိန်းခွဲသာ ပေးဆောင်ရကြောင်း အငှားယာဉ် အသိုင်းအဝိုင်းထံမှ သိရသည်။
ခိုးထားတဲ့ ဒေါ်လာ ၁ သန်းနဲ့ ကွန်ပြူတာ Hackers အုပ်စု အလှူပေး
Anonymous အမည်မသိသူများလို့ သူတို့ကိုယ်သူတို့ခေါ်တဲ့ အုပ်စုတစ်ခုက ပရဟိတအဖွဲ့အစည်းတွေကို ဒေါ်လာ တစ်သန်း လှူဒါန်းဖို့အတွက် အွန်လိုင်းလုံခြုံရေး ၀န်ဆောင်မှုပေးတဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုဆီကနေ အီးမေးလိပ်စာတွေနဲ့ အကြွေးဝယ်ကဒ်တွေရဲ့ သတင်းအချက်အလက် ထောင်ပေါင်းများစွာကို ခိုးယူခဲ့တယ်လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။
Stratfor ဆိုတဲ့ အွန်လိုင်းလုံခြုံရေးကုမ္ပဏီဟာ သူတို့ဆီမှာ အလုပ်အပ်ထားသူတွေရဲ့ သတင်းအချက်အလက် တွေကို တခြားလူ မသိနိုင်အောင် encrypt လို့ခေါ်တဲ့ ပုံဖျက်ဖုံးအုပ်တဲ့ နည်းပညာကိုသုံးပြီး လုံခြုံအောင် မလုပ်နိုင်ခဲ့တာကြောင့် ခိုးယူဖို့ လွယ်ကူသွားစေခဲ့တယ်လို့ မခံချိမခံသာဖြစ်အောင်ပြောပြီး ဒီကနေ့မှာ အွန်လိုင်းကနေ ထုတ်ပြန် ကြေညာထားပါတယ်။
Stratfor ကုမ္ပဏီမှာ အလုပ်အပ်ထားတဲ့သူတွေထဲမှာ ပင်တဂွန်စစ်ဌာနချုပ်၊ အမေရိကန်လေတပ်နဲ့ ကြည်းတပ်တို့ ပါဝင်ပါတယ်။ သူတို့အဖွဲ့ဟာ ခိုးယူထားတဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကို သုံးပြီး ကြက်ခြေနီ၊ CARE နဲ့ Save the Children အဖွဲ့တွေကို အလှူငွေတွေ ပို့ခဲ့တယ်လို့ Anonymous အဖွဲ့က ဆိုပါတယ်။
ထင်ရှားကျော်ကြား သူတွေဆီကနေ ခိုးယူထားတဲ့ သတင်း အချက်အလက်တွေကို သုံးပြီး ရုတ်ရုတ်သဲသဲ ဖြစ်အောင် လုပ်ပစ်မယ်လို့လည်း အဲဒီအဖွဲ့က အခိုင်အမာ ပြောထားပါတယ်။
အရင်တုန်းကဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ကွန်ပြူတာစနစ်တွေထဲကို ခိုးဝင် ထွင်းဖောက်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေကိုလည်း သူတို့လုပ်တာလို့ Anonymous အဖွဲ့က ပြောပါတယ်။
ကွယ်လွန်သူ မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် ကင်မ်ဂျုံအီလ်ရဲ့ အရိုက်အရာကို ဆက်ခံခဲ့သူဟာ နောက်ထပ် ထိပ်တန်း ရာထူးတစ်ခုကိုလည်း လက်ခံယူခဲ့တယ်လို့ မြောက်ကိုရီးယား အစိုးရသတင်းစာမှာ ဒီကနေ့ ဖော်ပြပါတယ်။
နိုင်ငံအတွက် ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချမှတ်ရာမှာ အမြင့်ဆုံး အာဏာပိုင်ဖြစ်တဲ့ အာဏာရ အလုပ်သမားပါတီရဲ့ ဗဟိုကော်မတီ ခေါင်းဆောင်အဖြစ် ကင်မ်ဂျုံအွန်းကို ခန့်အပ်လိုက်ကြောင်းကို ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့ Rodong Sinmun သတင်းစာက ရည်ညွှန်းရေးသားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ချင်းမိုင်(မဇ္စျိမ) ။ ။ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်မှ ၁၉၉ဝ ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ ဦးကျော်မင်းနှင့် မိသားစုကို လွှတ်ပေးရန် ပြင်သစ်နိုင်ငံ၊ ပဲရစ်မြို့အခြေစိုက် အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေး ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ NDPHR (ပြည်ပ)မှ တနင်္လာနေ့က တောင်းဆိုလိုက်သည်။
၂ဝ၁၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလအတွင်း နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကို လွှတ်ပေးရန် ရှိသည်ဟု သတင်းများ ထွက်ပေါ်လာ ပြီးနောက် မြင်းခြံထောင်မှ ဦးကျော်မင်းနှင့် အင်းစိန်ထောင်မှ ဇနီး ဒေါ်တီဇာ၊ သမီး မခင်ခင်နုနှင့် မဝါဝါခင်၊ သား ကိုအောင်နိုင်တို့ကိုလည်း လွှတ်ပေးရန် အစိုးရထံသို့ ကြေညာချက်ထုတ်၍တောင်းဆိုလိုက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း NDPHR ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှအောင်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
“အခု အစိုးရ ဦးသိန်းစိန်ကနေ ပွင့်လင်းမှုတွေ လွတ်လပ်တဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ဦးတည်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ အချိန်ကာလ မှာ တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေလည်း အများကြီး လုပ်ခဲ့ပါပြီး အဲဒါကို ကြိုဆိုပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ဆောင်ရွက်မှုကို
ပြည်သူတွေ ယုံကြည်လေးစားလာအောင် နံပါတ်တစ်အနေနဲ့ အရင်အစိုးရသစ် လက်ထက်က ဖမ်းထားတဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား အားလုံး ခြွင်းချက်မရှိ လွှတ်ပေးမှသာလျှင် လက်ခံ ယုံကြည်လောက်တဲ့ စေတနာမှန်နဲ့ အမြန်ဆုံး လွှတ်ပေးပါလို့ အထူးပန်ကြားချင်ပါတယ်”ဟု ဦးလှအောင်က ပြောသည်။
ဦးကျော်မင်းမှာ ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားပြုကော်မတီ CRPP အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပြီးနောက် အစည်းအဝေးများ တက်ရောက်ခြင်း အပါအဝင် နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှုနှင့် ဆက်စပ်၍ ဖမ်းဆီးခံရခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ကြေညာချက်တွင် ပါရှိသည်။
ဦးကျော်မင်းမှာ ၂ဝဝ၅ ခုနှစ် မတ်လ ၂၅ ရက်နေ့က အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမား အဖွဲ့ချုပ် ILO မှ ကိုယ်စား လှယ်များနှင့် ရန်ကုန်မြို့တွင် တွေ့ဆုံအပြီး အာဏာပိုင်များ၏ ဖမ်းဆီးခံရပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်မှုကို ရုပ်သိမ်း လိုက်ပြီး လဝက အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ (၁၈) နှင့် နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေး အက်ဥပဒေ ပုဒ်မတို့ဖြင့် ထောင်ဒဏ် ၄၇ နှစ်နှင့် ချမှတ်ခံခဲ့ရသည်။
၎င်း၏ ဇနီးသည် ဒေါ်တီဇာ၊ သမီးများဖြစ်ကြသည့် မခင်ခင်နု
ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်မှ ၁၉၉ဝ ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ ဦးကျော်မင်း
နှင့် မဝေဝေနု၊ သား ကိုအောင်နိုင် တို့ကိုလည်း နိုင်ငံသား အဖြစ်မှ ပြန်လည် ရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီး လဝက အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ထောင်ဒဏ် ၁၇ နှစ်စီ ချမှတ် ခံနေရသည်။
မခင်ခင်နုသည် အသည်းရောဂါနှင့် နှလုံးရောဂါ ခံစားနေရ သဖြင့် ပြီးခဲ့သည့် အောက်တိုဘာလက အင်းစိန်ထောင်
ဆေးရုံ တက်ခဲ့ရသည်။ လက်ရှိ ဆေးဝါးကုသမှု ခံနေရ
အကျိုးဆောင် ကွန်ယက်ကလည်း အစိုးရအဆက်ဆက်
က မည်သည့် ရည်ရွယ်ချက်ကြောင့် ထောင်ဒဏ် ချမှတ် ခဲ့ခြင်းဆိုသည်သာ အဓိက ကျသဖြင့် ဦးကျော်မင်းနှင့်
မိသားစုကို လွှတ်ပေး သင့်ကြောင်း တာဝန်ခံ ကိုအောင်ဇော်ထွန်းက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
“ဦးကျော်မင်းက အမတ်တယောက် ဖြစ်တယ်။ သူ့တမိသားစုလုံးကို လဝက တပ်ပြီးတော့ နိုင်ငံရေးအရ အကွက်ဆင် ပြီးတော့ ထည့်ထားတာဘဲ။ သူတို့ကို ဘာပုဒ်မပဲတပ်တပ် သူတို့ ဖမ်းဆီး အရေးယူထားတဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ကိုယ်တိုင်
နိုင်ငံရေး အကြောင်းတရားပေါ်မှာ လုပ်ထားတဲ့ ကိစ္စဖြစ်တယ်။ ကျနော်တို့က နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား တယောက်ကို ပုဒ်မကို ကျနော်တို ကြည့်မှာ မဟုတ်ဘူး။ သူတို့ ဘယ်လို ပုံစံနဲ့ချထားတယ်။ ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ချထားတယ် ဆိုတာ ကိုဘဲ ကြည့်မယ်”ဟု သူက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ဦးကျော်မင်းသည် ဘူးသီးတောင်ဇာတိဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ စီးပွားရေးဘွဲ့ ရခဲ့ပြီးနောက် အစိုးရဝန်ထမ်း အဖြစ် ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် အလယ်တန်း ကျောင်းအုပ်ဆရာမှ မြို့နယ် လက်ထောက် ပညာရေးမှူး အဆင့်ထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။
NDPHR ပါတီမှာ ၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ၌ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် ၁၊ ၂ နှင့် မောင်တော မဲဆန္ဒနယ်မြေ ၁ ၊၂ တို့ လေးနေရာမှ အနိုင်ရခဲ့သည်။ သို့သော် နအဖ အစိုးရက ရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက် နိုင်ငံရေးပါတီ အချို့ကို ဖျက်သိမ်းလိုက်သည့် အထဲတွင် ထိုပါတီလည်း ပါဝင်ခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သည့် ရက်သတ္တအပတ်က တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲတွင် ရထားဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းက နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ အပါအဝင် အကျဉ်းသားများကို ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်နေ့နှင့် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့များတွင် လွှတ်ပေးမည်ဟု ပြောဆိုခဲ့သည်။
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ အိမ်ခြေပေါင်း ၁၂၄ အိမ် လောင်ကျွမ်းပြီး ခန့်မှန်း ကာလတန်ဖိုး ကျပ် ၉၃၀ သိန်းကျော် ဆုံးရှုံးကာ လူဦးရေ ၉၉၃ ဦး အိုးအိမ်မဲ့ရသည့် မီးလောင်မှုတခု မွန်ပြည်နယ်၊ ပေါင်မြို့နယ်၊ ဇင်းကျိုက်မြို့တွင် တနင်္ဂနွေနေ့ညက ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟု ပေါင်မြို့နယ် ပြန်/ဆက်ဌာနက ပြောသည်။
“ရထားလမ်း အပေါ်ဘက်ခြမ်းကနေ စပြီး လောင်တယ်။ မီးက အဲဒီကနေ ခုန်ကူးပြီး ရထားလမ်း အနောက်ဘက် ကို ရောက်သွားတယ်။ အနောက်ဘက်ခြမ်း တိုးချဲ့ရပ်ကွက်က အကုန်လုံး ပါသွားတယ်” ဟု ပေါင်မြို့နယ် ပြန်ကြား
ရေးနှင့် ပြည်သူ့ ဆက်ဆံရေး ဦးစီးဌာနမှ အမျိုးသမီး ဝန်ထမ်း တဦးက ပြောသည်။
ဇင်းကျိုက်မြို့ တိုးချဲ့ရပ်ကွက်ရှိ ဦးစိန်ကျော် နေအိမ်မှ လျှပ်စစ်ဝါယာကြိုး ရှော့ဖြစ်ပြီး ည ၁၁ နာရီကျော်တွင် မီးစတင် လောင်ကျွမ်းခဲ့ကာ ဇင်းကျိုက်၊ ပေါင်၊ သထုံ၊ မုတ္တမနှင့် မော်လမြိုင်မြို့တို့မှ မီးသတ်ကား ၁၀ စီးကျော် လာရောက် ငြှိမ်းသတ်မှ တနင်္လာနေ့ နံနက် ၃ နာရီကျော်တွင် မီးညွန့်ကျိုးကာ နံနက် ၆ နာရီကျော်တွင် လုံးဝ မီးငြိမ်းသတ်နိုင်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
မော်လမြိုင်-ရန်ကုန် မီးရထားလမ်းဘေးရှိ ဇင်းကျိုက်မြို့သည် ရန်ကုန်မှ ၂၅၅ မိုင်၊ မော်လမြိုင်မှ ၂၄ မိုင် ကွာဝေး သည်။ အိမ်ခြေ သုံးထောင်နီးပါးရှိ ဇင်းကျိုက်ရွာကြီးကို ယခင်အစိုးရလက်ထက် ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှ စ၍ ဇင်းကျိုက်မြို့ အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်ခဲ့သည်။
ယာယီမီးဘေး ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း အဖြစ် ဇင်းကျိုက်ရွာ အ.မ.က. ရွှေဒင်္ဂါးကျောင်းတွင် ဖွင့်လှစ်ထားကာ အိုးအိမ်မဲ့သူများကို အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှ တဆင့် ထမင်းထုပ်နှင့် အဝတ်အထည်များ ကူညီပေးနေကြောင်း ဇင်းကျိုက်သား တဦးက ပြောသည်။
“အဓိက လိုအပ်နေတာက စောင်၊ ဆောင်းတွင်းဆိုတော့ စောင်မရှိရင် မဖြစ်ဘူး” ဟု သူက ပြောသည်။
တနင်္လာနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် မွန်ပြည်နယ် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီး ဦးထွန်းလှိုင်၊ ပေါင်မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးမြတ်အောင်ထွေးနဲ့ ဌာနဆိုင်ရာ အကြီးအကဲများ မီးလောင်ရာသို့ သွားရောက် ကြည့်ရှုခဲ့ကြောင်း ပြန်ကြားရေး ဌာနက ပြောသည်။
ရန်ကုန် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ကွယ်လွန်လေပြီးသော ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင်များကို ရည်စူးကာ မိသားစုဝင်များက ရေစက် သွန်းချ အမျှပေးဝေလှူဒါန်းပွဲကို တနင်္လာနေ့ နံနက် ၉ နာရီက ရန်ကုန်မြို့ ဇီဝိတဒါန သံဃာ့ဆေးရုံတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ သည်။
ဒီဇင်ဘာ ၂၆ ရက်နေ့မှာ ၁၉၄၁ ခုနှစ်က ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့၌ ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင်များ လွတ်လပ်ရေးအတွက် လက်မောင်းသွေးကို ဖောက်ကာ သွေးသစ္စာ ဆိုခဲ့ကြသည့်နေ့ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဤနေ့ ရောက်တိုင်း ရဲဘော် သုံးကျိပ်ဝင် မိသားစုများက တွေ့ဆုံပွဲ လုပ်ခဲ့ကြသည်မှာ ၂၈ နှစ် ကြာပြီဖြစ်၍ ယခုနှစ်တွင် ဇီဝိတဒါန သံဃာ့ဆေးရုံမှ ပင့်သံဃာတော် ၂၈ ပါးကို အလှူအတမ်း ပေးဝေခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးသော ခေတ်မီ အမျိုးသား တပ်မတော်ဖြစ်သည့် ‘ဗမာ့ကာကွယ်ရေး တပ်မတော် BIA’ ကို ဖွဲ့စည်း တည်ထောင်ခဲ့ကြသည့် ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင်များထဲမှ ၂၈ ဦးမှာ ကွယ်လွန်သွားကြပြီ ဖြစ်သည်။
ကွယ်လွန်လေပြီးသော ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင်များကို ရည်စူးကာ မိသားစုဝင်များက ရေစက် သွန်းချ အမျှပေးဝေလှူဒါန်း (ဓါတ်ပုံ မဇ္ဈိမ)
သခင်ရွှေ (ခေါ်) ဗိုလ်ကျော်ဇောနှင့် ကိုအောင်သိန်း (ခေါ်) ဗိုလ်ရဲထွဋ်တို့ နှစ်ဦးသာ သက်ရှိထင်ရှား ရှိနေတော့ကြောင်း ရဲဘော်သုံးကျိပ်ထဲမှ မိသားစုဝင် တဦးက ပြောသည်။
“ကျနော်က နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင် မိသားစုတွေ တွေ့ဆုံပွဲကို တက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနှစ်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဖိတ်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဦးနေဝင်း မိသားစုတော့ မသိပါဘူး။ အယူအဆတွေ ဘယ်လိုပဲ ကွဲပြားနေစေကာ ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင် မိသားစုတွေ တွေ့ဆုံနိုင်အောင် အရင်ကပဲ ရဲဘော် သုံးကျိပ်ဝင်တွေ ကိုယ်တိုင် လုပ်ခဲ့တာ။ အခုဆိုရင် သက်ရှိထင်ရှား နှစ်ယောက်ပဲ ကျန်တော့တယ်။ သခင်ရွှေ (ဗိုလ်ကျော်ဇော) ကတော့ ကူမင်းမှာ မိသားစုဝင်တွေနဲ့ နေတယ်လို့ ကြားတယ်။ ကိုအောင်သိန်းကတော့ လက်တွန်း ကုလားထိုင်နဲ့ ပဲ နေရတော့ တယ်။ မသွားနိုင်ဘူးလေ။ အသက်က ၉၀ ဆိုတော့လေ” ဟု သူက ပြောသည်။
‘ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင် မိသားစုများ သာရေးနာရေးအဖွဲ့’ ကိုလည်း ၁၉၈၃ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၆ ရက်နေ့က ဖွဲ့စည်းထား သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ ကူမင်းမြို့၌ နေထိုင်သည့် ဗိုလ်မှူးချုပ် (ဟောင်း) ကျော်ဇောက “ကျနော် ၉၂ နှစ် ပြည့်ပါပြီ။ ကျနော် ကျန်းမာပါတယ်။ အားလုံးပဲ ကျန်းမာပါစေ။ ဒီမိုကရေစီ အမြန်ရပါစေ။” ဟု ၂၀၁၁ ခု ဒီဇင်္ဘာ ၃ ရက်နေ့က ကျရောက်
သော မွေးနေ့ နှုတ်ခွန်းဆက်စကားတွင် ပါရှိသည်။
အခန်းအနားတခုတွင် တွေ့ရသော KNU တပ်ဖွဲ့ဝင်များ(ဓာတ်ပုံ - globalchin.org)
ဒီဇင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့က ထိုင်းနိုင်ငံ ကန်ချနဘူရီ ခရိုင်နှင့် တနင်္သာရီတိုင်း ထားဝယ်မြို့ကို ဆက်သွယ်ထားသော ကားလမ်းပေါ် တွင် ITD ကုမ္ပဏီကားများ အလုပ်လုပ်နေစဉ် KNU တပ်ဖွဲ့ဝင်များက ၆ နာရီခန့် ပြန်ပေးဆွဲခဲ့ပြီး နေ့လယ် ၁၂ နာရီ တွင် ပြန်လွှတ် ပေးခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကုန်ပိုင်းက ထိုင်းနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း Khon Kaen မြို့ရှိ ငါးဖမ်းပိုက်ကွန်စက်ရုံတွင် အလုပ်သမားအခွင့်အရေးအတွက် ဆန္ဒပြနေကြသော မြန်မာပြည်သား အလုပ်သမားများ (ဓာတ်ပုံ - ဧရာဝတီ)
ထိုင်း နိုင်ငံရောက် မြန်မာ အလုပ်သမားများ အရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး ယခုနှစ်ဆန်းပိုင်းမှ စတင်၍ ကူညီဆောင်ရွက်ရန် မြန်မာ အစိုးရ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနကစီစဉ်နေကြောင်း ပြောသည်။
“ကျနော်တို့ လာမယ့် ဇန်န၀ါရီလဆန်း ၅ ရက်နေ့လောက်က စပြီး လုပ်ငန်းလုပ်နိုင်အောင် စီစဉ်နေပါတယ်”ဟု နေပြည်တော် အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနရုံးမှ တာဝန်ရှိသူတဦးက ဧရာဝတီကို ပြောပြသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံသို့ အလုပ်သမားပြဿနာ ကူညီဖြေရှင်းရေး လုပ်ငန်းအဖွဲ့ ၅ ဖွဲ့ကသွားရောက်၍ မြန်မာ အလုပ်သမားများ အတွက် နိုင်ငံသား စိစစ်ရေး၊ ယာယီ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များ ထုတ်ပေးရေး၊ အလုပ်သမားများ၏ သားသမီးများကို မြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုနိုင်ရေး၊ တရားဝင် မှတ်ပုံတင်နိုင်ရေးနှင့် အခွင့်အရေးကာကွယ်ရေးများကို စီစဉ် နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယမန်နေ့ကမှ ထိုင်းနိုင်ငံက ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသော အလုပ်သမားဒု-၀န်ကြီး ကလည်း မြန်မာ အလုပ်သမားရေး ဆိုင်ရာများကို ထိုင်းအစိုးရ အာဏာပိုင်များနှင့် ဆွေးနွေးခဲ့ရာ အဆင်ပြေခဲ့ကြောင်း ဆိုသည်။
“အရင်နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်တုန်းက မြန်မာအလုပ်သမားတွေရှိနေတယ်ဆိုတာ မြန်မာအစိုးရက အသိအမှတ်မပြုခဲ့ဘူး။ အခုလို အစိုးရတရပ်က အသိအမှတ်ပြုလာပြီး အကျိုးဆောင်ပေးမယ်ဆိုတာကတော့ အပြုသဘောနဲ့ ကြိုဆိုတယ်။ ဒါ ပေ မယ့် အခု သူတို့ လုပ်နေတဲ့ အခင်းအကျင်းတွေက မလုံလောက်သေးဘူး”ဟု ထိုင်း နိုင်ငံရောက် မြန်မာ အလုပ်သမားများအရေး လှုပ်ရှားသူတဦးဖြစ်သည့် ကိုကျော်သောင်းက ဧရာဝတီကိုပြောသည်။
ကိုကျော်သောင်းနှင့် အလုပ်သမားအရေးလှုပ်ရှားသူများသည် ဒီဇင်ဘာ ၂၃ ရက်နေ့က မြန်မာ ဒု အလုပ်သမား ၀န်ကြီး ဦးဆောင်သော အဖွဲ့နှင့် အလုပ်သမားများအရေး ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
မြန်မာ အလုပ်သမားများစွာရှိသည့် ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်၊ ချင်းမိုင်၊ မဟာချိုင်၊ စူရတ်ဌာနီ၊ စမွတ်ပရာကန် ၅ မြို့တွင် ရုံးထိုင် လုပ်ကိုင်မည့် အလုပ်သမားကူညီရေးတစ်ဖွဲ့တွင် အဖွဲ့ဝင် ၈ ဦးစီ ပါဝင်မည် ဖြစ်ကြောင်း ၄င်းတို့ကို နေပြည်တော် တွင် သင်တန်းများပေးနေကြောင်း သိရသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် မြန်မာ အလုပ်သမား တရားဝင်နှင့် တရားမ၀င်သူ စုစုပေါင်း၂ သန်းမှ ၃ သန်းခန့် ရှိသည်ဟု အလုပ်သမား အရေး လှုပ်ရှားနေသူများက ခန့်မှန်းထားကြသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာအလုပ်သမားများမှာ ယာယီနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဖြင့် တရားဝင်နေထိုင်ခြင်း၊ ဘတ်ဟု ခေါ်သည့် အလုပ်လုပ်ခွင့်လက်မှတ်ဖြင့် တရားဝင်နေထိုင်ခြင်းနှင့် အဆိုပါ ၂ ခုလုံး မရှိဘဲ တရားမ၀င် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေထိုင် သူများဟူ၍ ၃ မျိုးရှိကြောင်း အလုပ်သမားအရေး ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူများက ဆိုသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် အလုပ်လုပ်မည့် မြန်မာအလုပ်သမားတဦးသည် ယာယီနိုင်ငံကူးလက်မှတ်လုပ်ရန် မြန်မာဘက်ခြမ်းတွင် ကျပ်ငွေ ၅၀၀ မှ ၁၀၀၀၀ ကျပ်အထိ မြန်မာအစိုးရက တိုးမြှင့်လိုက်ကြောင်း၊ ထိုင်းဘက်ခြမ်းတွင် ထိုင်းဘတ်ငွေ ၄၅၀၀ မှ ၆၅၀၀ အထိ ကုမ္ပဏီများက လုပ်ဆောင်ပေးကြောင်း၊ ကုန်ကျပြီး အလုပ်သမား လက်မှတ်အတွက် ဘတ်ငွေ ၃၉၀၀ ကုန်ကျသည်။
ယာယီနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ကိုင်ဆောင်ထားသူသည် ထိုင်းနိုင်ငံတ၀န်း သွားလာ လုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိပြီး ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ကို တရားဝင် ၀င်ထွက်ခွင့်လည်းရှိသည်။ အလုပ်သမားလက်မှတ် ကိုင်ဆောင်သူသည် အလုပ်ရှင်၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်သာ နေ ထိုင် သွားလာခွင့်ရှိပြီး အလုပ်အပြောင်းအလဲ လုပ်လိုပါကလည်း အလုပ်ရှင်၏ ခွင့်ပြုချက် လိုအပ်သည်။
ယင်း လက်မှတ်များ၏ အမှန်တကယ် ကုန်ကျစရိတ်သည် သတ်မှတ်ထားသည့် ပမာဏ ထက်ပိုမိုများပြားမှုရှိကြောင်း ကိုကျော်သောင်း က ပြောသည်။
ယခု မစ္စ ယင့်လပ် အစိုးရ က ထိုင်းနိုင်ငံရှိ မည်သည့် အလုပ်သမားမဆို တနေ့ အလုပ်လုပ်ခ အနည်းဆုံး ဘတ် ၃၀၀ ရစေရ မည်ဟု ဆိုသော်လည်း နေရာနှင့် လုပ်ငန်းပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားကြပြီး အများစုမှာ တနေ့ လုပ်အားခ ၆၀ ဘတ်မှ ၂၅၀ ဘတ် အထိသာ ရကြကြောင်း သိရသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာအလုပ်သမားများသည် ထိုင်းလုပ်ငန်းရှင်များက ယာယီ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကို သိမ်းထားပြီး မိတ္တူကိုသာ လက်ဝယ်ကိုင်ခွင့်ပေးခြင်း၊ လုပ်အားခ ပုံမှန်မရရှိခြင်း၊ အပြည့်အ၀ မရရှိခြင်း၊ အချိန်ပိုကြေး မပေးခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းခွင် ထိခိုက် ဒဏ်ရာရမှု နစ်နာကြေး မရခြင်း စသည့် ပြဿနာများကို အဓိက ရင်ဆိုင်နေကြရသည်ဟု သိရသည်။
မြန်မာအစိုးရ ဒု နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး ဦးမောင်မြင့်က“ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ အလုပ်သမားတွေ သာမက ပြည်ပမှာရှိတဲ့ တရားဝင် ကော တရားမဝင်ကော အလုပ်သမားတွေ အားလုံးကို စောင့်ရှောက်ပေးဖို့ကတော့ ကျနော်တို့ အစိုးရရဲ့ တာဝန် ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးကို ပြေလည်အောင် ပြီးပြတ်အောင် အခွင့်အရေး အပြည့်အဝရစေအောင် ဆက်ပြီးတော့မှ ကြိုးစားသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု ပြောဆိုထားသည်။
မြန်မာ-ထိုင်း၂ နိုင်ငံဆွေးနွေးပွဲများတွင် မြန်မာအလုပ်သမားများအား အကာအကွယ်ပေးရေး ကိစ္စများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း၊ မြန်မာအလုပ်သမားများ လက်ခံရေးကို ထိုင်း-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံ အလုပ်သမားဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်အရ အစီအစဉ်ရှိကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံဘက်က ထိုင်းနိုင်ငံသို့ အလုပ်သမား တသိန်း စေလွှတ်ရန် ရှိသော်လည်း ယခုနှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် သုံးသောင်း ကျော်သာ စေလွှတ်ထားသေးကြောင်း ထိုင်းအစိုးရ အလုပ်သမား ၀န်ကြီးဌာနကလည်း ထုတ်ပြန်ထားသည်။
ထိုင်းအစိုးရက၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၅ ရက်ကနေ ဇူလိုင်လ ၁၄ ရက်နေ့အထိ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများမှ လာရောက်သော အလုပ် သမားများကို တရားဝင် မှတ်ပုံတင် လုပ်ပေးခဲ့စဉ် မြန်မာ အလုပ်သမား ၇ သိန်းခန့် စာရင်းလာသွင်းခဲ့ကြောင်း ထိုင်း အလုပ် သမားရေး ၀န်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံရှိ မြန်မာအလုပ်သမား အများစုသည် ဆောက်လုပ်ရေး ၊ ရေလုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ အထည်ချုပ် စက်ရုံ၊ အိမ်အကူ စသည့် လုပ်ငန်းများ၌ လုပ်ကိုင်ကြရသည်။